ShweMinThar: April 2016
♪ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ နာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များခဲ့သော Original Songs ♫
Original/Copy သီချင်းမှတ်စုမှ ချမ်းအေးဇော် စုစည်းထားသောသီချင်းများကိုရှာ၍တင်ပေးပါသည်။ ဦးကျော်ဟိန်း၏သီချင်းများကို ၇၀၊ ၈၀၊ ၉၀ ခုနှစ် သီချင်းသည်များဒေါင်း၍ပြန်လည်တင်ပေးပါသည်။
ဦးကျော်ဟိန်း Original Songs
01. Smokie - I'll Meet You at Midnight
02. Linda Ronstadt - BLUE BAYOU
03. Glenn Frey - Party Town
05. Leo Sayer - WHEN I NEED YOU
06. Eagles - TEQUILA SUNRISE
07. Bee Gees - How Deep Is Your Love
08. Rod Stewart - You GotaNerve
09. Rod Stewart - Sailing
ပုလင်းပေါ်က မြန်မာ အက္ခရာများ
11. Rod Stewart - The First Cut Is The Deepest
12. Kansas - Dust In The Wind
13. Crystal Gayle - Somebody Loves You
14. Cliff Richard - Move it
15. Blancmange - Blind Vision
16. Cliff Richard & The Shadows - She's Gone
17. CCR - Pagan Baby
18. Queen - I Want to Break Free
19. The Doors - Riders on the Storm
20. Michael Sembello - Maniac
21. J.D. SOUTHER - - YOU'RE ONLY LONELY
22. Nazareth - Love Hurts
23. Fleetwood Mac - You Make Loving Fun
24. CCR - Cotton Fields
25. CCR - Susie Q
26. John Fogerty - The Old Man Down the Road
မြင်သော ငိုသော မျက်လုံး
27. Dire Straits - Money For Nothing
Credit to ==> ဂီတအကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ
Posted by Alex Aung at 9:27 AM No comments:
" ကျွန်လုပ်သားများထုတ်လုပ်သည့် ပင်လယ်စာ " (အပိုင်း - ၁)
အရှေ့တောင်အာရှ ရေလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်သမားများကို ၎င်းတို့၏ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အင်အားသုံးမတရားခိုင်းစေနေမှုများတွင် ကျယ်နေခြင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် AP သတင်းဌာနသည် စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးသားသည့် သတင်းသမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူတစ်နှစ်ကျော်ခန့် သတင်းများထောက်လှမ်းရှာဖွေ စုဆောင်းခဲ့သည်။
AP သတင်းဌာန၏ ယင်းသတင်းသမားအဖွဲ့သည် ကျွန်လုပ်သားများဖမ်းဆီးပေးလိုက်သည့် ငါးများမှာ ကမ္ဘာတ၀မ်း အဆင့်ဆင့်ပို့ဆောင်မှုများမှတဆင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပတ၀မ်းရှိဈေးများနှင့် ညစာဝိုင်းများသို့ ရောက်ရှိလျှက်ရှိကြောင်းခြေရာခံမိခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ စုံစမ်းထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်မှု၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် ကျွန်လုပ်သား ၂၀၀၀ ကျော်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ကုမ္ပဏီကြီးများဘက်မှ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ လည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ထိုဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ခဲ့မှုအတွက် AP သတင်းဌာနမှာလည်း အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပူလစ်ဇာဆုနှင့် အခြားဆုများချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
စတင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ရက်စွဲ - မတ်၊ ၂၅ ၊ ၂၀၁၅
မိမိတို့၏နေအိမ်မှာ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသော အပူပိုင်းဒေသကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုပေါ်ရှိလှောင်ချိုင့်အတွင်းတွင် ချုပ်နှောင်ခံထားရသောကျွန်ပြုခံ မြန်မာလုပ်သားများသည် သံတိုင်များကိုဖြတ်ကာငေးမော လျှက်ရှိကြသည်။
ကိုက်အနည်းငယ်ခန့်အကွာတွင်မူအခြားလုပ်သားများသည် ကုန်သင်္ဘောများပေါ်သို့ ကုန်များထမ်းတင်လျှက်ရှိကြရာအဆိုပါကုန်များသည် ကျွန်လုပ်သားများဖမ်းမိထားသည့် ပင်လယ်စာများဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနာမည်ကျော် ဆူပါမားကတ်ကြီးများ၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးများဆီအထိကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှု ကွန်ယက်များကို အရိပ်မည်းထိုးလျှက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများပင် ဖြစ်သည်။
အဖမ်းခံထားရသူများထဲမှ ၈ ဦးမှာမူလက်ရှိအခြေအနေမှလွတ်မြောက်အောင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန် ကြိုးစားဝံ့လောက် သူများဟုယူဆဖွယ်ရာရှိသည်။၎င်းတို့သည် နောက်ထပ်ငါးဖမ်းလှေတစ်စီးနှင့် ပင်လယ်ထဲသို့ အတင်းစေလွှတ်မခံရမချင်းတစ်ကိုယ်ရေလဲလျောင်းသာရုံနေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲတွင် မ၀ရေစာ ထမင်းနှင့်ဟင်းတို့ဖြင့် နေ့စဉ်အသက်ဆက်ရလျှက် ရှိသည်။
'' ကျွန်တော် မခံနိုင်တော့ဘူး။ အိမ်ပြန်ချင်တယ်လို့ ကပ္ပတိန်ကိုပြောလိုက်မိတာနဲ့ပဲကမ်းလည်းပြန်ကပ်ရော ကျွန်တော်အချုပ်ခန်းထဲထည့်ပိတ်ခံရတော့တာပဲ '' ဟုကျော်နိုင်က အနီးဝန်းကျင်ရှိအစောင့် တစ်ဦးကြားသွားမည်ကိုထိတ်လန့်ဟန်ဖြင့် ခပ်တိုးတိုးပြောကြားသည်။
ဤနေရာသည် ရေပတ်လည်ဝိုင်းလျှက်ရှိသည့် အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းရွာတစ်ရွာဖြစ်သော ဘင်ဂျီနာရွာဖြစ်ပြီးရာနှင့်ချီသော အမျိုးသားများပိတ်မိသောင်တင်လျှက်ရှိသောနေရာလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ပင်လယ်စာလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်လျှက်ရှိသောကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံများနှင့် ရှုပ်ထွေးစွာဆက်နွယ်လျှက်ရှိသော အဆိုးရွားအကြမ်းတမ်းဆုံးကွင်းဆက်လည်းဖြစ်သည်။
ဤရှုပ်ထွေးသောအချိတ်အဆက်များသည် ကျွန်တော်တို့စားနေသောငါးများနှင့် ထိုငါးများကိုဖမ်းဆီးပေးခဲ့သူများကိုသီးခြားစီဖြစ်နေအောင်ခွဲခြားထားပြီး ကျွန်တော်တို့စားနေသောပင်လယ်စာများသည် ကျွန်လုပ်သားများ၏ လုပ်အားမှထွက်ပေါ်လာလျှက်ရှိသည်ဟူသောရက်စက်လှသည့်အမှန်တရားကိုမမြင်သာအောင် လည်းဖုံးကွယ်ထားလျှက်ရှိသည်။
AP သတင်းဌာနကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူအများစုမှာ မြန်မာများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် အင်ဒိုနီးရှားသို့ ခေါ်ဆောင်ခံရကာငါဖမ်းလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်ရန် အင်အားသုံးခိုင်းစေခံရသူများဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ဖမ်းဆီးပေးရသည့် ပင်လယ်သတ္တ၀ါများကိုမူ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးထိုမှတဆင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အတွင်းသို့ စီးပွားဖြစ်တင်ပို့ ရောင်းချလျှက်ရှိသည်။
ကျွန်လုပ်သားများ ၏ လုပ်အားမှထွက်ပေါ်လာသောငါးများသည် တစ်ဖက်လှည့်ဖြင့် အမေရိ၏ နာမည်ကျော် လက်လီအရောင်းဆိုင်ကြီးများ၊ ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်၊ရောင်းချ ရေးလုပ်ငန်းကြီးများဆီအထိပင်ရောက်ရှိလျှက်ရှိသည်။
AP သတင်းဌာနသည် တစ်နှစ်တာသတင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုအတွင်းတွင် ဘင်ဂျီနာတွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေရဆဲ ကျွန်လုပ်သားများနှင့် ယခင်ကလုပ်ကိုင်ခဲ့ရသူပေါင်း ၄၀ ကျော်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကျွန်လုပ်သားများဖမ်းဆီးပေးလိုက်သည့်ငါးများကိုတင်ဆောင်ထားသည့်သင်္ဘောတစ်စီးအင်ဒိုနီးရှားရွာမှ ထိုင်းဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ကပ်သွားသည်ကို ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်များမှ တဆင့်ခြေရာခံ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် အဆိုပါငါးများကိုဒါဇင်နှင့် ချီသောစက်ရုံများ၊ အအေးပေးခန်းစက်ရုံများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးငါးဈေးကြီးအတွင်းသို့ ပို့ဆောင်သောထရပ်ကားများနောက်သို့လည်း AP ၏ သတင်းထောက်များက ၄ ညကြာနောက်ယောက်ခံလိုက်ကာမှတ်တမ်းတင် ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ကျွန်လုပ်သားများ၏ လုပ်အားမှထွက်ပေါ်လာသောပင်လယ်စာများသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိပင်လယ်စာ ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများအပါအ၀င် နေရာအသီးသီး၌ အခြားငါးများနှင့် ရောနှောသွားပြီး အမေရိကန်အကောက်ခွန်ဌာန၏ မှတ်တမ်းများအရထိုစက်ရုံများထဲမှ အချို့မှာအမေရိကသို့ ပင်လယ်စာများတင်ပို့လျှက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ထိုစက်ရုံများသည် ဥရောပနှင့်အာရှသို့လည်းတင်ပို့ရောင်းချလျှက်ရှိသော်လည်း AP သတင်းဌာနအနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းများကိုအများပြည်သူသို့ထုတ်ပြန်ပေးသည့် အမေရိကသို့တင်ပို့မှုများ ကိုသာခြေရာခံခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကျွန်လုပ်သားများဖမ်းဆီးပေးလိုက်သည့် ငါးများမည်သည့်နေရာ၌အဆုံးသတ်သွားသည်ကိုပြောရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်အနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ သို့ရာတွင် ထိုပို့ဆောင်မှု ကွင်းဆက် အားလုံးမှာညစ်ထေးလျှက်ရှိပြီး ကျွန်လုပ်သားများမှတဆင့် အကျိုးအမြတ်ရလျှက်ရှိသောကုမ္ပဏီများမှနေ၍ ငွေများမှာနေရာအသီးသီးသို့ ပျံ့နှံ့ရောက် ရှိလျှက်ရှိနေသည်။
AP သတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သောအဓိကကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများကမေးမြန်းစဉ်တွင် တရားဝင်မှတ်ချက်ပေး ပြောကြားခြင်းမျိုးမရှိသော်လည်း အင်အားသုံးစေခိုင်းမှုများကို အပြင်းအထန်ရှုံ့ ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပြီးလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအပါအ၀င် အင်အားသုံးစေခိုင်းမှုများကိုတားဆီးရန် လိုအပ်သည့် အဆင့်များကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ၎င်းတို့ အားလုံးကပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်သီးပုဂ္ဂလပင်လယ်စာဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းအချို့ကမူ ၎င်းတို့ထံတင်သွင်း လာသောပစ္စည်းများကို နောက်ကြောင်းရှင်းလင်းကြောင်းသေချာအောင် အတည်ပြုရန်မှာ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးသလို အသေးစိတ် လုပ်ငန်းအဆင့်များလုပ်ဆောင် ရန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်ဟုမှတ်ချက်ပေးသည်။
AP သတင်းဌာနကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သော ကျွန်လုပ်သားများမှာမူ ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးပေးလိုက်သည့် ငါးများမည်သည့် နေရာသို့ ရောက်သွားသည်ဆိုသည်ကိုစိုးစဉ်းမျှမသိကြချေ။ ၎င်းတို့သိသည်မှာ ထိုငါးများနှင့် ပင်လယ်သတ္တ၀ါများ မှာတန်ဖိုးအလွန်ကြီးသဖြင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် စားခွင့်မရှိဆိုသည့်အချက်သာဖြစ်သည်။
ငါးဖမ်းလှေများပေါ်တွင် မာလိန်မှူးများက ၎င်းတို့ကိုမသန့်ရှင်းသောရေများအတင်းသောက်ခိုင်းပြီးတစ်ရက်လျှင် နာရီ ၂၀ မှ ၂၂ နာရီအထိနားရက်မရှိလုပ်ခိုင်းလေ့ရှိသည်ဟု ၎င်းတို့ကပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် အနားပေးရန် ခွင့်တောင်းပါကအရိုက်အနှက်၊အကန်အကျောက်ခံရပြီးအဆိပ်ရှိသည့် ငါးလက်ထုံများနှင့် ရိုက်နှက်ခြင်းလည်းခံရသည်ဟု ၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးကပြောကြားသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် တန်ဖိုးကြီးငါးများ၊ ပင်လယ်သတ္တ၀ါများဖမ်းဆီးပေးနေရသော်လည်း ၎င်းတို့မှာအလွန်တရာနည်းပါးလှသောလုပ်ခသာရတတ်ပြီး လုံးဝလုပ်ခမရခြင်းမျိုးများလည်း ရှိနေသည်။
၎င်းတို့၏ငါးဖမ်းလှေများဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားချိန်တွင် အချို့ကျွန်လုပ်သားအချို့မှာသတင်းထောက်များထံအော်ဟစ်ပြီးအကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။
အဆိုးဆုံးမှာငါးဖမ်းလှေများပေါ်၌ပင် ခန္ဓာကိုယ်ချို့တဲ့သွားရသူများ၊ အသက်ဆုံးရှုံးသွားရသူများရှိနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
'' တကယ်လို့ အမေရိကန်တွေနဲ့ ဥရောပသားတွေကဒီငါးတွေကိုစားတယ်ဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုသတိရသင့်ပါတယ် '' ဟုဘင်ဂျီနာကျွန်းမှထွက်ပြေးလာခဲ့သည့် အသက် ၃၀ အရွယ် လှိုင်မင်း က ပြောကြားသည်။
'' ပင်လယ်အောက်မှာအရိုးတွေတောင်လိုပုံနေမှာပါ။ လူတွေရဲ့အရိုးတွေက ကျွန်းတစ်ကျွန်းတောင် ဖြစ်လောက်ပါတယ်။ အဲဒီလောက်ကိုများပါတယ် '' မြန်မာကျွန်လုပ်သားများအတွက် မူဘင်ဂျီနာသည် ကမ္ဘာကြီး၏ အဆုံးသတ်ပင်ဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်တာအတွင်း မုတ်သုံရာသီဝင်ရောက်ပြီးအာရာဖူရာပင်လယ်တွင် မိုးသည်းထန်နေသည့်လများတွင် ဘင်ဂျီနာကျွန်းသို့ လှေဖြင့်သွားရောက်၍မရချေ။ ထို့ပြင် အင်တာနက်လိုင်းလည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက် လျှက်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက တာဝါတိုင်တစ်ခုမစိုက်ထူမီကဆိုလျှင် ရွာသားများသည် မက်ဆေ့ခ်ျတစ်စောင်ပို့နိုင်ရန် အတွက် အင်တာနက်လိုင်းမိမလားဟူသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိတောင်ကုန်းများပေါ်သို့ ညနေတိုင်းတက်လေ့ ရှိကြသည်။
ဘင်ဂျီနာကျွန်း၏ ဆိပ်ကမ်းငယ်လေးကိုပူဆာကာဘင်ဂျီနာလုပ်ငန်းက ချုပ်ကိုင်သိမ်းပိုက်ထားသည်။ ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ငါးထပ်ရုံးအဆောက်အဦတွင် ကျွန်လုပ်သားများထည့်ထားသည့် လှောင်ချိုင့်များရှိနေသည်။
ယင်းကုမ္ပဏီသည် ဘင်ဂျီနာတွင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အင်ဒိုနီးရှား၌ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးငါဖမ်းသင်္ဘော ၉၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ်မှတ်တမ်းထားရသော ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ၏ ကပ္ပတိန်များမှာထိုင်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီးသင်္ဘောများမှာအမှန်တကယ်ထိုင်းလူမျိုးပိုင်သင်္ဘောများဟုတ်၊မဟုတ် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ပြန်လည်သုံးသပ်လျှက်ရှိသည်။
ပူဆာကာဘန်ဂျီနာကုမ္ပဏီသည် ဖုန်းဖြင့်ရော၊ စာဖြင့်ပါဆက်သွယ်မေးမြန်းမှု များကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိသလိုဂျကာတာရှိ၎င်း၏ရုံးတွင် ၂ နာရီကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့သည့် သတင်းထောက်ကိုလည်း လက်ခံတွေ့ဆုံ ခဲ့ခြင်းမရှိချေ။ ဘင်ဂျီနာကျွန်း၏ ကုန်တင်၊ကုန်ချဆိပ်ကမ်းတွင် ကျွန်လုပ်သားဟောင်းများမှာအစားအစာနှင့် မုန့်ဖိုး၊ပဲဖိုးရရန်အတွက် ကုန်ထမ်းလျှက်ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊ ၁၅ နှစ်၊ တစ်ချို့မှာ အနှစ် ၂၀ ခန့် ကျွန်လုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပြီးသည့်နောက်တွင် ငါးဖမ်းသင်္ဘောကပ္ပတိန်များကစွန့်ပစ်လိုက်ကြသော်လည်း ကျွန်းပေါ်တွင် ဆက်လက် သောင်တင်နေသူများ ဖြစ်သည်။
ကျွန်းအတွင်းပိုင်းရှိတောနက်နက်ထဲတွင်မူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားသည့် ကျွန်လုပ်သားများမှာအစားအစာ နှင့် သောက်သုံးရန်မိုးရေကိုရှာဖွေနေရလျှက်ရှိပြီးအခကြေးငွေယူပြီး ကျွန်လုပ်သားများကို ဖမ်းဆီးပေးသူများတွေ့သွားမည်ကိုလည်းအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့် ဖြစ်ရလျှက်ရှိသည်။
ကမ်းခြေတွင်မူ ကျွန်လုပ်သားငါးဖမ်းသမားများ၏မြေပုံများရှိနေသောသင်္ချီုင်းတစ်ခုရှိနေပြီး ကျွန်လုပ်သားများမှာ ၎င်းတို့ကိုလိမ်ညာရောင်းချခံရစဉ်ကပေးထားသည့် ထိုင်းနာမည်အတုများနှင့်သာ မြုပ်နှံခံ ထားရကာ ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရမှုကို ထာဝရဖုံးကွယ်ခြင်းခံထားရသည်။
ထိုဒေသသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပိုင်နက်ဖြစ်သော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှသင်္ဘောများအပါအ၀င် တရားမ၀င်ငါးဖမ်းသင်္ဘော အများအပြား၏ စားကျက်ဖြစ်လျှက်ရှိပြီးထွက်ပေါ်လာသော ကုန်သွယ်မှုများမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြား နိုင်ငံများအထိရိုက်ခတ်လျှက်ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ပင်လယ်စာအများဆုံးတင်ပို့လျှက်ရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအမေရိကသို့ နှစ်စဉ်တင်ပို့လျှက်ရှိသည့် ပင်လယ်စာ ၇ ဘီလျံဖိုး၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုထိုင်းနိုင်ငံက တင်ပို့နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထိုင်းနိုင်ငံကိုလူမှောင်ခိုကူးမှုများကိုထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းရန် ပျက်ကွက်မှုဖြင့် မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ အီရန်တို့နှင့် အဆင့်တူနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခဲ့သော်လည်းထပ်ဆောင်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိချေ။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် အဆိုပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအာဏာပိုင်များကပြောကြားထားပြီး ဥပဒေအသစ်ပြဌာန်းမှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ဘင်ဂျီနာကျွန်းအရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီးမေးမြန်းသည့် အခါတွင်မူထိုကိစ္စမှာကိုင်တွယ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ထို့အတူထိုင်းအာဏာပိုင်များကတိုင်းပြည်အတွင်းဝင်ရောက်လာသော တရားမ၀င်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကိုမှတ်ပုံတင်မည့် အစီအမံအသစ် တစ်ခုဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကတိပြုထားသော်လည်း ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီပြီး ကြာမြင့်နေသော တရားမ၀င်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်သားများနှင့် လှေများမှာတိုင်းပြည်နှင့် ဝေးသည်ထက်ဝေးသွားလျှက်ရှိနေပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ရေပိုင်နက်များထဲသို့ ပိုမိုရောက်ရှိသွားလျှက်ရှိနေသည်။
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကမူ နိုင်ငံရေပိုင်နက်အတွင်း တရားမ၀င်ဝင်ရောက်ပြီး ပင်လယ်သတ္တ၀ါများဖမ်းဆီးကာ ဒေါ်လာဘီလျံနှင့် ချီအကျိုးအမြတ်ရယူနေသော ပြည်ပတရားမ၀င်ငါးဖမ်းသင်္ဘောများကို တားဆီးရန်ရည်ရွယ်၍ ငါးဖမ်းဆီးမှုများကိုယာယီတားမြစ်သွားရန် ပြောကြားထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ငါးဖမ်းသင်္ဘော ၅၀ ကျော်မှာဘင်ဂျီနာကျွန်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားရပြီး ကျွန်လုပ်သား ၁၀၀၀ ကျော်မှာ လည်းယင်းကျွန်းတွင် သောင်တင်နေကာရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်မည်မှန်းမသိပါဘဲစောင့်ဆိုင်းရလျှက်ရှိသည်။
Credit: Mizzima သတင်းဌာန
Posted by Alex Aung at 2:18 PM No comments:
Labels: Opinion, ဆောင်းပါး
ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ကူးပြောင်းရာ၌ သာမန်ပြည်သူလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍ (နိဂုံး)
By ခရစ္စတီယန် ၀ယ်လ်ဇယ်
အာဏာပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးများ ရှင်ကျန်မှုသည် လူထုတွေကို ဖိနှိပ်ဖို့ အီလစ်တို့ ရွေးချယ်ခြင်း၊ မရွေး ချယ်ခြင်းအပေါ် ခပ်ရိုးရိုး မေးခွန်းတရပ် မဟုတ်တော့ပါ။ တဖန် အီလစ်များနှင့် လူထုတို့အတွင်း အင်အားစုများ ချိန်ခွင်လျှာက ဤကိစ္စကို သက်ရောက် ရိုက်ခတ်ပြန်ပါသေးသည်။
ထိုချိန်ခွင်လျှာ မျှခြေက အချိန်ကာလအပေါ် ပြောင်းလဲသွားစေသည်။ အနီးဆုံး ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းလှိုင်း ခပ်ကြီးကြီးထဲ၌ လူထုပါဝင်ရွေ့လျားမှု သက်ရောက်ချက်တို့ တွေ့ရ၏။ လူတွေကြားထဲ ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ အပေါ် ဂရုပြု အာရုံစိုက်မှု ကြီးထွားအားကောင်းလာခြင်းက လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်သည်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုများကို ကောင်းစွာ စုစည်းနိုင်ပြီး မှန်မှန်ကြီးမားလာသော အင်အားပြည့်လူတွေက လူထုဖြစ်လာသည်။
ထိုလူထုအတွက် ထိုလူထုကပဲ လှုံ့ဆော်စေ့ဆော်ပေးသည်။ မော်ဒန်နိုက်ဇေးရှင်း၏ အဓိကအကျိုးဆက် သက်ရောက်မှုမှာ အီလစ်တွေ ဒီမိုကရေစီကို လက်ခံလာအောင် လုပ်ဖို့မဟုတ်။ သို့သော်ငြားလည်း ဤအချက်ကပဲ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ ဖြစ်လာစေရေး သာမန်လူတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်နှင့် ဆန္ဒပြု ဆောင်ရွက်ချက်တို့ကို တိုးပွား ကြီးမားစေပြန်ပါ၏။
ဘွိုက်ခ်စ်၏ ကောင်းစွာ ရှင်းပြထားသော သီအိုရီကျကျ မိုဒယ်က ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းသည် ဝင်ငွေညီမျှမှု ရေချိန်မြင့်မားလာချိန်နှင့် အရင်းရွေ့လျားမှု ဖြစ်ပေါ်လာချိန်နှစ်ရပ် အဆက်အစပ်ကို မူတည် ပေါ်ထွန်းလာကြောင်း ပုံဖော်ပြထားသည်။ ထိုအခြေအနေများ အောက်၌ အီလစ်တို့အနေဖြင့် လူတိုင်း ဆန္ဒမဲပေးခွင့် ပြုထားခြင်း ဆိုသည်လောက်နှင့် စိတ်ချ လုံခြုံစွာ နေထိုင်နေပိုင်မှုက ဆက်စပ်နေပြန်သည်။ ဘွိုက်ခ်စ်၏ သီအိုရီပိုင်းမှာ ဆွဲအားကောင်း ညှို့အားပြင်းသည်မှန်ငြား သံသယ ဖြစ်ဖွယ်တချို့ ရှိနေသည်။ ထိုအနေအထားများဟူသည်မှာ ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းကို ရံဖန်ရံခါ ကျေးဇူးပြုတတ်သည့် ကိစ္စရပ်တို့ထဲမှ အချက်တချို့သာ ဖြစ်ပါ၏။
ဖြစ်ရပ်နှင့် လက်တွေ့အခြေခံ၍ ဘွိုက်ခ်စ်က ရှင်းပြရန် အားထုတ်ထားသော်လည်း စာတပုဒ်လုံးသည် သူ့ချည်းသက်သက် ဖြစ်နေပြီး လုံလောက်ပြီ မဆိုနိုင်ပေ။ အကြောင်းအရာအားဖြင့် ပြောရပါက အရင်းရွေ့လျားနိုင်စွမ်း ဖော်ပြချက်တို့က သူ့ကျမ်းကို သက်သေပြနိုင်ဖို့ မလုံလောက်၊ သဟဇာတမဖြစ်၊ မညီညွတ်ပါ။ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးရေး စံပြုအညွှန်းကိန်း တရပ်ဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဆက်စပ် အရွယ်အစားကို ထည့်သွင်းပြထား၏။ အမှန်ဆိုလျှင် မော်ဒန်နိုက်ဇေးရှင်း လုပ်ငန်းစဉ်၌ စိုက်ပျိုးရေးမှ စက်မှုသို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် အလွန်ဗဟိုချက်ကျ ကိစ္စဖြစ်၏။ သို့သော် စိုက်ပျိုးရေးမှ စက်မှုသို့ အကူးအပြောင်းသည် အရင်းရွေ့လျားနိုင်မှု၏ သတ်မှတ်စံညွှန်း ကိန်းတရပ် မဟုတ်သလို မော်ဒန်နိုက်ဇေးရှင်း ယေဘုယျအမြင် တရပ်အဖြစ် ဖြင့်သာ ဆက်စပ်၏။
အရင်းရွေ့လျားမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ရေး၌ တခြားမြောက်မြားလှသော အရာများဖြင့် ပြဆိုနိုင်ပြီး ထိုအထဲမှ ဤအချက် တချက်ကိုသာ သတ်မှတ်စံပြုပြ၍မရ၊ မဖြစ်နိုင်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်၏ ပျမ်းမျှ နှစ်စဉ် ကျောင်းတက်နှုန်းကိုလည်း အရင်းရွေ့လျားမှု အညွှန်းကိန်း တရပ်အဖြစ် အသုံးပြုပြထားပြန်သည်။
တဖန် ထိုအချက်ကို မော်ဒန်နိုက်ဇေးရှင်း ဗဟိုကျ စံညွှန်းကိန်းများထဲမှ တချက်ဟု ထပ်ပြောထားပါ၏။ ဖြစ်သင့်သည်က လူတွေ နိုင်ငံရေး၌ ပိုမိုထိရောက်အားကောင်း ပါဝင်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်လာနိုင်ဖို့ လူထုပညာရေး ရေချိန်များ မြင့်တက်လာစေ ခြင်းအဖြစ် လူမှု-ပူးပေါင်းပါဝင် ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းရှိခြင်း ခေါင်းစဉ်အောက်၌သာ ပြသင့်ပါ၏။
အီလစ်တို့အနေဖြင့် ဝင်ငွေပြန်လည် ခွဲဝေပျံ့နှံ့မှု၊ လူထုပညာရေးတို့ကို ကာကွယ်ဖို့ ရုန်းကန်စိတ်အမြဲ ရှိတတ်ကြခြင်းသည် လူတွေ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများအတွက် ရုန်းကြွနိုးကြားလာစေခြင်းကို ဘယ်လို သက်ရောက်စေသလဲ၊ အီလစ်တို့ ခံစားချက် စိတ်ချလုံခြုံမှု ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုသော အညွှန်းကိန်းနှင့် ဝေးကွာနေ၏။ ဘွိုက်ခ်စ်က မော်ဒန်နိုက်ဇေးရှင်းစံပြ အညွှန်းကိန်းများကို အရင်းရွေ့လျားမှု အညွှန်းကိန်းတို့အဖြစ် ခပ်ရိုးရိုး အဖန်ဖန်တလဲလဲ တံဆိပ်ကပ်ပြထားပြန်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးနှင့်အတူ ၎င်းအချက်တို့ ဆက်နွယ်နေကြောင်း ထပ်ရှင်းလင်းထား၏။
သူ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သာဓကပြုချက်တို့က အီလစ်တွေအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများ အာမခံထောက်ပံ့ပေးမှု အတွင်း လုံခြုံနေကြသည် ဆိုသော အချက်အောက်မှ အနေအထားများကို ကိုယ်ပိုင်မိုဒယ်အဖြစ် ပြုပြထားသည်ထက် မော်ဒန်နိုက်ဇေးရှင်း သီအိုရီ အမြင်ပုံစံမျိုးကိုသာ ပိုအထောက်အကူ ဖြစ်စေနေကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်၏။
အက်စီမိုဂလူးနှင့် ၎င်း၏ ပူးတွဲရေးသားသူတို့ ထပ်ချဲ့တင်ပြထားချက်ကလည်း လေသံ တသံတည်း ပေါက်နေသည်။ ၎င်း ဆရာများက ချမ်းသာသော နိုင်ငံများသည် ဆင်းရဲသည့်နိုင်ငံများထက် ဘာကြောင့် ပို၍ ဒီမိုကရက်တစ် ဖြစ်ပုံရကြောင်းနှင့် အတွင်းကျကိစ္စရပ်တို့ကို အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း တနည်းတဖုံ တင်ပြထားကြသည်။
သမိုင်းဝင် ကိန်းဂဏန်းများ ချပြအသုံးပြုခြင်း ပုံစံဖြင့် အက်စီမိုဂလူးနှင့် ပူးတွဲရေးသားထားသူများက အချိန်ကာလကို နောက် ပြန်ဆုတ်ပြပြီး ဓနဥစ္စာမြင့်မားမှုကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ပိုမြင့်တက်လာကြောင်း ပြဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့ သုံးသပ်ချက်၌ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကို ပြန်တွန်းပို့ပြီး ဝင်ငွေပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲခြင်းများကြားမှ အပြုသဘော ပူးတွဲ ဆက်နွယ်မှုတရပ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြထားသည်။ ပူးတွဲဆက်နွယ်နေမှု တရပ်ဆိုသည်က သတ်မှတ်နိုင်ငံ အကျိုးသက် ရောက်မှုများအတွက် ချုပ်ကိုင်လိုက်ချိန်၌ ချည့်နဲ့ (သို့မဟုတ်) ပျောက်ကွယ်သွားပါ၏။ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီအမြင့် နှစ်ရပ်လုံးသည် အားကောင်းသော မှီခိုလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ရာစု ၅ ရာစုမှ ဥရောပနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုလိုနီများ ဤမှီခိုလမ်းကြောင်းဖြင့် အမြင့်ပျံတက်လာခဲ့ကြသည်။ အခြား နိုင်ငံတွေကတော့ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုများနှင့် စီးပွားကြီးထွားနှုန်း အနိမ့်လမ်းကြောင်းတရပ်ဆီ ရောက်သွားခဲ့ကြသည်ဟု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နိဂုံးချုပ် သုံးသပ်ပြထားပါသည်။
အီလစ် အပေးအယူကိစ္စကို စာရေးသူတို့ အထူးပြု ဖော်ပြထားသော်လည်း ၎င်းတို့ တွေ့ရှိချက်များက ယဉ်ကျေးမှုခြင်းရာ ကိစ္စများသည်လည်း အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍတရပ်အဖြစ် ပေါ်လွင်နေ၏။ အမျိုးသားနိုင်ငံ သတ်မှတ် ဖော်ပြချက် သက်ရောက်မှု အကျိုးများ အရေးပါပုံကို ဖော်ပြထားရာ၌ ထိုသက်ရောက်ချက်များ၏ သဘာဝကိုတော့ အနည်းငယ်သာ ထည့်သွင်းပြထားသည်။
ထိုသက်ရောက်ချက်များ၏ အမျိုးသားနိုင်ငံ သတ်မှတ်ပြုခြင်း/ ပြုပုံနှင့် နှစ်ခွကြား ကာလဖြစ်နိုင်ခြေတို့သည် ယဉ်ကျေးမှု ဖက်တာများကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ် အခြေပြုနေကြောင်း ရောဘတ်ပွတ်နမ် ဖွင့်ဆိုလှစ်ဟပြခဲ့သည့် အီတလီ တောင်ပိုင်း-မြောက်ပိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတို့ကြား ကွဲပြားခြားနားချက် သရုပ်ခွဲပြထားသည်နှင့် အလားသဏ္ဍာန် တူနေပါ၏။ ပွတ်နမ်အနေခြင့် ရာစုများချီ၍ နောက်ပြန်ဆုတ် ရှာဖွေခွဲခြမ်း ဖော်ထုတ်ပြရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ရသည်။
အက်စီမိုဂလူးနှင့် သူ၏ပူးတွဲရေးသားသူများ မှန်ကန်ခဲ့ကြသည်မှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု တခုတည်းနှင့် ဒီမိုကရေစီကို ယူဆောင် မလာနိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါ၏။ ဒီမိုကရေစီသည် ယဉ်ကျေးမှုဖက်တာများ သေသေချာချာတွဲယှက် ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်း ဖြင့်သာ “ဖြစ်”လာပါ၏။ သို့သော် ယင်းဖက်တာများသည် ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် ၎င်းတို့ ကိုလိုနီပြုနယ်မြေများ၌ ရေရာသေချာ စေရန် လိုအပ်ချက်အရ တခုတည်းရှိ၊ တရပ်တည်းကျ မဟုတ်ခဲ့ကြ၊ မဟုတ်ကြပါ။ ကမ္ဘာ့စံတန်ဖိုးများ စစ်တမ်းများ (WVS) ၏ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ချက် သာဓကအရ အနီးကပ်ဆုံးနှစ်များအတွင်း ဤယဉ်ကျေးမှု ဖက်တာများ ကမ္ဘာ့ဒေသအများစုကို ဖြတ်သန်းပျံ့နှံ့လာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
လူထုတန်ဖိုးများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများသည် ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းအပေါ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးဆန် ဘေးထွက်နောက် ဆက်တွဲ အကျိုးတရပ် ရှိနေခြင်းဆိုသည်ကဲ့သို့ ရေးသားမှုကို ဘွိုက်ခ်စ်မိုဒယ်၊ အက်စီမိုဂလူးမိုဒယ် နှစ်ရပ်လုံးက ပြမထားပါ။ တကယ်တန်းတော့ ဤတန်ဖိုးများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများသည် စကားလုံးအားဖြင့် ဖော်ပြမထားသော်လည်း မပြောင်းမလဲ တည်မြဲခြင်းတို့ ဖြစ်စေရန် ချိတ်ဆက်လျက် သဘောသက်ရောက် အကျုံးဝင်နေပြီး လူထုဆန္ဒပြအုံကြွမှုကို စီးပွားရေး မညီမျှမှု မြင့်မားလာချိန်၌ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည့် ကိစ္စရပ်ဟူသော ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအမြင် ဖြစ်သည်။
ဤဖော်ပြချက်များက သမိုင်း အချက်အလက်များနှင့်တော့ ကောင်းကောင်း အံကိုက်ဖြစ်၏။ သို့သော် အနီးကပ်ဆုံး ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်း လှိုင်းအကြောင်း ပြည့်စုံလုံလောက်အောင် ရှင်းမပြနိုင်ပေ။ နိုင်ငံရေး စေ့ဆော်ချက်များသည် တကယ်စင်စစ် စိတ်ကူးသက်သက် မဟုတ်ဘဲ ရွေ့လျားပြောင်းလဲနေပြီး ၁၉၇၄ ကတည်းကစ၍ စက်မှုခေတ်လွန် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၌ လူထုဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပူးပေါင်းလိုစိတ် နှစ်ဆကျော် မြင့်တက်လာနေကြောင်း သိသာထင်ရှား သိရှိတွေ့မြင်ရပါ၏။
၁၉၈၇ မှ ၁၉၉၅အထိ ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းအတွက် လူထုဆန္ဒပြပွဲများ သမိုင်းဝင်အရေအတွက် ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြရာတွင် ဆိုးလ်နှင့် မနီလာမှသည် မော်စကိုနှင့် ဘာလင်တို့အထိ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏။ ထပ်ပြောရလျှင် ဤရုန်းကြွမှုသည် စီးပွား ရေးပြန်လည်ခွဲဝေပျံ့နှံ့စေမှု အခြေခံသက်သက်တရပ်အတွက်မဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးလွတ်လပ် လွတ်မြောက်မှုအတွက် လည်း ဖြစ်နေပြန်သည်။
ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဟောင်းများ၌ ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းသည် စီးပွားရေး ညီမျှမှုအတွက် လူထုဖိအားများကြောင့် ပေါ်ထွန်းလာခြင်း မဟုတ်။ စီးပွားညီမျှရေးကို အင်အားအပြည့် ဂရုဓမ္မ ပြုကြပြောကြသော အီလစ် လူတန်းစားတရပ် လက်အတွင်းမှ နိုင်ငံရေးပါဝါကို ပြောင်းလဲ ရွေ့လျားစေလိုခြင်းနှင့် လူထုဆီ ပါဝါ ပိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန်ရောက်ရှိစေရန် အတွက် ဆိုခြင်းက ပိုများပြီး စီးပွားညီမျှရေးဖိအားက ပိုနည်းခဲ့ကြပါ၏။
ဒီမိုကရေစီသည် လူတိုင်း ဆန္ဒမဲပေးခွင့်၊ ဓနပြန်လည် ခွဲဝေပျံ့နှံ့စေမှုတို့ကို လိုချင်သော အကျိုးစီးပွား တရပ်မျှလောက်ကနေ ပေါ်ထွန်းထွက်ပေါ် ဖြစ်တည်လာခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဆန္ဒမဲပေးခွင့် ဆိုသည်လောက်ထက် နောက်ကွယ် အဓိပ္ပာယ်များစွာ ကျယ်ဝန်းလှသော ဒီမိုကရက်တစ် လွတ်လပ်မှုများအတွက် ရုန်းကြွမှုတရပ်မှ ပေါ်ထွန်းခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
လူသားသမိုင်းစဉ် အများစုကို ကြည့်မြင်ကြည့်ကြပါက နီးစပ်ရာနှင့် ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒ၊ အော်တိုကရေစီတို့သာ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေခဲ့သည်။ အီလစ်တို့က လူထုကို နှိပ်ကွပ်နေနိုင်စွမ်းကြောင့် သိပ်တော့ ရိုးရိုးစင်းစင်းမရှိ၊ မဟုတ်။ မော်ဒန်ခေတ် ထိတိုင်အောင် လူထုလူအုပ်စုအနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများဘက်၌ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများကို သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး လျော့နည်းအားပျော့ခဲ့သည်။ တဖန် ဤ အချက်ကို ဝန်းရံကိုင်စွဲထားရေး ဆိုသည်ကလည်း ထိပ်တန်းဦးစားပေး မဟုတ်ခဲ့ပြန်ပါ။
ဒီမိုကရေစီ ဘယ်လိုပေါ်ထွန်းလာကြောင်း နားလည်ရန်အတွက် အီလစ်တို့ကောင်းစွာ တင်းကျပ်ချုပ်နှောင်ထားနိုင်မှု အပေါ် အမြင်ရှင်းကြရန်လည်း လုံလောက်မှု မရှိခဲ့ပေ။ လူထုရေချိန်အဆင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုများကိုလည်း လေ့လာရမည်ဖြစ်ရာ၌ ဤတချက်က မလုပ်မဖြစ် အနေအထားသို့ မြင့်မားလာနေပါ၏။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုသည် ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် ပူးတွဲနွယ်ယှက်၍ အပြုသဘော ဆက်စပ်နေသည် ဆိုသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးသက်ရောက်မှုက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများကို အားပေးတိုးမြှင့်ကြရန် အခြေခံ ကျကျ တိမ်းညွတ်ကြစေဖို့ လိုအပ်ချက်ရှိနေသည်။ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုသည်က စက်မှုထွန်းကားရေး ဗဟိုပြုနည်းစဉ် တရပ်ဖြစ်ပြီး လူထုပညာရေး၊ မော်ဒန်အလုပ်အကိုင်နေရာချထားခြင်းတည်ဆောက်ပုံတရပ်နှင့် လက်ရှိကာလ အဓိကလုံခြုံ ရေးရေချိန်အမြင့်များတို့ကို ဆောင်ကျဉ်းလာစေ၏။
ဤအခြင်းအရာအားလုံးက သာမန်ပြည်သူလူထုကို ဒီမိုကရေစီအပေါ် ဂရုဓမ္မစိုက်မှု တိုးမြင့်လာစေရန် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် နှင့် နေရာကျလာစေပါသည်။ ရေနံတင်ပို့နိုင်ငံများကို ကြည့်လျှင် ဤအဟုန်မြင့် လမ်းကြောင်းကို မလိုက်ဘဲ ဥစ္စာဓနတွေ အများအပြား ကြွယ်ဝလာခဲ့ကြ၏။ ၎င်းနိုင်ငံတို့မှ ပြည်သူလူထု ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီမိုကရေစီရှာဖွေခြင်းပေါ် စေ့ဆော်ချက် ရှိပုံ မပေါ်ကြ။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံများ ဒီမိုကရက်တစ် ဖြစ်မလာပေ။
နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ ဆရာတချို့ ကောက်ချက်ချသလို ဒီမိုကရေစီကို ဆန္ဒာဓိကကျကျ အလိုချင်ဆုံးသူများ မရှိသရွေ့ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။ လူတွေအနေဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် အရေးကြီးရင်းမြစ်များကို ဆက်စပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ် ဆောင်ရွက်လာနိုင်ချိန်၊ သက်ရှင်ရပ်တည်ရုံ တန်ဖိုးများမှ ဖယ်ခွာ၍ ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများဆီ ရှေးရှု ဂရုဓမ္မပြုလာချိန် ရောက်လျှင်တော့ (လုပ်လာကြပြီဆိုလျှင်တော့) ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ရေး ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ရုန်းကန်တည်ဆောက် ရှေ့ဆက်လှမ်းကြွကြမည်သာ ဖြစ်၏။
ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်းဖိုးများသည် ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းပိုင်းကျ စိတ်ချယုံကြည်မှု၊ သဘောထား ကြီးရင့်ကျက်မှုနှင့် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုဝါဒတို့ကို ရိုက်ခတ်သက်ရောက်စေပါသည်။ အားကောင်းမောင်းသန် ထိုအချက်သည် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေး၊ တည်တံ့သန်မာ ရှင်ကျန်ရေးအတွက် အလွန်အရေးပါသော အဆုံးအဖြတ် အခန်းကဏ္ဍတရပ် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီကို ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းဖြစ်စေ၊ အကျယ်တဝင့်ဖြစ်စေ ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါ၏။ ကျနော်တို့အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဒီမိုကရေစီ အနိမ့်ဆုံး ဖွင့်ဆိုချက်မျှလောက်လေးကို အသုံးပြု၊ အသုံးချကြမည်ဆိုပါက ပြည်သူလူထု ဝိသေသလက္ခဏာများသည် ဘာမျှ အရေးမပါလှတော့ပေ။ ရွေးကောက်ပွဲများ ဆိုခြင်းကသာ နေရာတိုင်း အရာတိုင်း အားလုံးအတွက် နောက်ကွယ်မှ ကြီးစိုးနေပေမည်။ သို့သော် ဒီမိုကရေစီကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားသည်ဆိုသော ယေဘုယျဆန် အထွေထွေ အများသုံး လက်ခံချက်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ အချိန်ကာလတရပ်ကို ဖြတ်သန်း၍ လိုအင်ဆန္ဒ ပိုများလာနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဆုံးကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ထွန်းခဲ့စဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ (ဘယ်သူ ဘာကို ဘယ်လောက် ပိုင်ဆိုင်သည်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ ပိုင်ဆိုင်မှဟူသော အကြောင်းခံများ) နှင့် မိန်းမ၊ ကျေးကျွန်တို့ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်၊ ဥစ္စာ စုဆောင်းခွင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ပြန်တွေး ချင့်ချိန်နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်လာကြရာမှ ယနေ့တွင်တော့ ထိုဖွင့်ဆိုချက်ကို လက်ခံမည့်သူ ရှိတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားသိမြင်နိုင်ပါသည်။
ပညာရှင်အများကလည်း ဒီမိုကရေစီအတွက် ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည့် ခပ်သိမ်သိမ် ဖွင့်ဆိုချက်များအပေါ် ပို၍ပို၍ ဝေဖန်သုံးသပ်လာနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အနေဖြင့် ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းဆိုသည်ကို သာမန်နိုင်ငံသားများ လက်သို့ နိုင်ငံရေးပါဝါရွေ့စေ၊ ရောက်စေခြင်း နည်းစဉ်တရပ်ဟု ကြည့်မြင်ကြမည်ဆိုပါက ဒီမိုကရေစီကို ပို၍ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဖွင့်ဆိုရန် လိုအပ်လာကြပြီ ဖြစ်သည်။
သို့နှင့်ပင် ကျနော်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ထုတ်ဖော်လာနိုင်ခဲ့သော အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်တရပ် ရရှိလာခဲ့ကြ၏။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ကူးပြောင်းရာ၌ သာမန်နိုင်ငံသားတို့၏ ဦးတည် ရည်မှန်းချက်များကသာ အဓိကဗဟိုချက် အခန်းကဏ္ဍတရပ် ဟူသော ဖွင့်ဆိုချက်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
(ခရစ္စတီယန် ၀ယ်လ်ဇယ် (Christian Welzel) သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘရီမင်းမြို့၊ ဂျက်ကော့ဘ်စ်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးစံများ စစ်တမ်းကောက်ယူရေး အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ရော်နယ်အင်း ဂဲဟာ့တ် (Ronald Inglehart) သည် မီချီဂန်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးစံများ စစ်တမ်း ကောက်ယူရေး ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ထုတ် “ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု အပြောင်းအလဲနှင့် ဒီမိုကရေစီ” စာအုပ်ကို ခရစ္စတီယန်ဝယ်လ် ဇယ်နှင့် ရော်နယ် အင်ဂဲဟာ့တ်တို့ ပူးတွဲရေးသားခဲ့ပြီး တခြားထင်ရှားသော စာအုပ်များကိုလည်း ပြုစုခဲ့သည်။ ယခု ဆောင်းပါးကို Journal of Democracy နှင့် Johns Hopkins University Press တို့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီး Educational Initiatives (ပညာရှေ့ဆောင်) က ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Educational Initiatives (www. eduinitiatives.org) အဖွဲ့သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းများ၊ အရည်အသွေးမြှင့် သင်တန်းများကို ပို့ ချပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။)
Posted by Alex Aung at 12:58 PM No comments:
Labels: Opinion, ဗဟုသုတ
“ဘဝ” ဆိုသော ၊ “အချစ်”ဆိုသော အရာတို့သည် စကားနှစ်လုံးတည်းပင် ဖြစ်သော်လည်း တော်တော်လေး နားမလည်နိုင်အောင် ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းလှ၏။ ရွှေလိုသဲ့သဲ့ပြီး ရှုပ်ထွေးလှသည့်
ဘဝထဲက အနှစ်ကို ကျင်ယူတတ်မှ တော်ကာကြ၏။
မုတ်ကောင်၏ အသားနုပေါ် တဖြည်းဖြည်းသဲမှုန်လေးတွေကျရာမှ
အဖိုးတန် ပုလဲအဖြစ်သို့ ရောက်ရသကဲ့သို့ အချစ်နှင့်ယှဉ်တွဲနေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဘဝထဲမှ တဖြေးဖြေး ဘဝ၏ အနှစ်သာရကို ထုတ်ယူကြကာ ဒုက္ခခပ်သိမ်းငြိမ်းကြကုန်၏။ ပုထုဇဉ်တို့၏ အချစ်သံသရာ ၊ ဘဝသံသရာကား ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် ရှည်လျားလှ၏။
ခရီးကရှည် စာရိတ္တက ခပ်သိုးသိုး၊ အဖော်ကလည်း ခပ်ဆိုးဆိုးနှင့် ကြုံရတတ်သေး၏။ အမျိုးအမျိုး ကာမဂုဏ်အဖျက်အမှောင့်တွေကြောင့်
အပါယ်ဘုံအခါခါ ရောက်ခဲ့ကြသည်လည်း မနည်းလှတော့။
သို့သော် တရားသံဝေ ရကြလေတော့ ချစ်သူစိမ်း၍ အချစ်ဇာတ်သိမ်း ဒုက္ခငြိမ်းကာ သံသရာတစ်ထောက် ရပ်နားနိုင်ကြသောသူများလည်း ရှိပါသေးသည်။
ထိုသူတို့တွင် “ဓမ္မဒိန္နာ သူဌေးကတော်လေး”လည်း ချစ်သူစိမ်း၍ ဒုက္ခငြိမ်းခဲ့ရဘူး၏။ အချိန်ကား တော်တော်လေး ကြာညောင်းခဲ့လေပြီ။
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဘုရားဖြစ်ပြီး ဒုတိယဝါလောက်မှာပင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ဇာတ်လမ်းလေးပင်ဖြစ်၏။ ရာဇဂြိုဟ်မြို့သား သူဌေးသား “ဝိသာခ လုလင်”နှင့် “သူဌေးသမီး ဓမ္မဒိန္နာ”တို့ ရွှေလက်တွဲကာ
ဝိသာခ သူဌေးသားအဖို့ လွတ်လပ်ခြင်းတွေစတေးပြီး ဓမ္မဒိန္နာအတွက် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ စတေးရသည် ဟု မယူဆခဲ့ပေ။ နှစ်ဦးသား လွတ်လပ်ခြင်းတွေ ရင်မှာပိုက် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ တပွေ့တပိုက်နှင့် သေတပန်သက်တဆုံး ရိုးမြေကျ ပေါင်းသင်းဖို့ လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
သို့သော်ဘဝမှာ မထင်မှတ်တာ မျှော်လင့်မထားတာလေးများ
ကြုံလာသောအခါ မူလရည်မှန်းချက် အိပ်မက်လေးများလည်း
မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်လာတတ်၏။ သူဌေးသားလေး ဝိသာခသည်
မြတ်ဗုဒ္ဓ ပထမဆုံးအကြိမ် ရာဇဂြိုဟ်မြို့သို့ ကြွလာသောအခါ
တရားဓမ္မနာကြားရ၍ ရာဇဂြိုဟ်ပြည့်ရှင် ဘုရင် “ဗိဗ္ဗိသာရမင်းကြီး”နှင့်အတူ ပရိတ်သတ်ပေါင်း ၁၂၉၀
သောတာပန်ဖြစ်ကြသည်ထဲတွင် သူဌေးသားလေး “ဝိသာခ” သည်လည်း တစ်ယောက်အပါဝင်ပင်ဖြစ်သည်။
သောတာပန်သူဌေးသားလေး ဝိသာခသည် သောတာပန်ဖြစ်သော်လည်း ကာမဂုဏ်အာရုံကို လုံးဝ
မပယ်သတ်နိုင်သေးသောကြောင့် သူဌေးသမီး “ဓမ္မဒိန္နာ”နှင့်
မိသားစုဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆက်လက်မြဲ။ ကဗျာနူနု စာနုနု ချစ်သူ့ရင်ခုံသံ စောင်းသံတမျှ နားလျှံဆဲ။ အယုအယပိုပို သမုဒယချိုချို ခပ်ဖွဖွစကားသံလေးများ သူနှစ်ကိုယ်ကြားမှာ ကြားရဆဲ။ တရစ်ရစ်တိုး
ထိုသို့သော တူနှစ်ကိုယ် ချစ်ရည်လူးပျော်ရွှင်မြူးစဉ်ကာလ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ဝါးတောရိပ်မွန် ဝေဠုဝန်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးစဉ် ဝိသာခသူဌေးသားလေး တရားနာကြားရပြန်တော့ “အနာဂါမ် အရိယာ” ဖြစ်သွားခဲ့လေပြီ။ ထိုအချိန်မှစ၍ အနာဂါမ် ဝိသာခသူဌေးလေးသည်
ချစ်ဇနီးဓမ္မဒိန္နာကို - ကျွန်းကုရု ဇေယျာမှာ၊ ပဒေသာ နန်းပင်မြင့်ဖွား၊ ရွှေကသစ် ရိပ်ကြာမှာ၊ နတ်မိမယ်တစ်ပါး ဟု မမြင်တော့ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အနာဂါမ်တို့မည်သည် ကာမဂုဏ် အာရုံမှန်သမျှ
ပုထုဇဉ်ဘဝဖြစ်နေရှာသော ဓမ္မဒိန္နာအဖို့ တချိန်က သူမ၏နေမင်းကြီးသဖွယ်ဖြစ်သည့် ချစ်သူမောင် ဝိသာခ သူဌေးသား အနာဂါမ်ဖြစ်ဖြစ်သွားလေတော့ သူမအဖို့ နေပူလောင်ကျွမ်း အသဲကျွမ်းရကိန်းနှင့် ကြုံရှာလေပြီ။
နေမင်းကြီး ဝင်သွားပြန်တော့ အမှတ်တရပွင့်ဖတ်များ
တလွှားလွှားခြွေချခဲ့ဘူးသည့် အိမ်ဦးအရှင် နေမင်းကြီးကို အကြောင်းပြု၍ တမ်းတ လွမ်းရ ငိုကြွေးကြပေလိမ့်ဦးတော့မည်။ အနာဂါမ်အဆင့်နှင့် ပုထုဇဉ်အဆင့် အလွန်တရာကွာလွန်းသောကြောင့် “ဝိသာခနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ”တို့ အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ် ဆိုသလို ရှေးယခင်ကအတိုင်း ပျော်တပြုံးပြုံးမော်မဆုံးအောင် အတူတကွ ရှေ့ဆက်လက်တွဲဖို့ ခက်ခဲလာပေတော့မည်။
ဝိသာခသူဌေးသားလေး အနာဂါမ်အရိယာမဖြစ်ခင်က သူ-အဝေးအနီးခရီးမှပြန်လာသည့်အခါတိုင်း ချစ်ဇနီးတို့ ထုံးစံအတိုင်း ဓမ္မဒိန္နာသည် ခြင်္သေ့ခံလေသာပြူတင်းမှ စောင့်မျှော်လျှက၊် ရောက်လာသည့်အခါ ချစ်စဖွယ်ရာတီတီတာတာ စကားများပြောလျှက် အပြုံးလေးများဖြင့် ခရီးဦးကြိုဆိုမြဲ။ နှစ်ကိုယ်တူ လှေကားထိပ်မှာ လက်ကိုဆန့်တန်း ပွေ့ဖက်လျှက် နှုတ်ဆက်မြဲ။ ဦးဦးဖျားဖျား အစားအစာများ ကျွေးမြဲ။ ယောကျာင်္းကြိုက်တော့ စိုက်စိုက်လာ၊ မိန်းမကြိုက်တော့ မျှော်လိုက်တာ ဆိုသလို မိမိ၏အိမ်သို့ စိုက်စိုက်ပြန်လာသော ချစ်သူမောင် အပြန်လာကိုပင် သစ်ကုလားအုပ်ပမာ ဓမ္မဒိန္နာ လည်တဆန့်ဆန့် အမြဲတန်းစောင့်မျှော်ရစမြဲ။
ဝိသာခသူဌေးသားလေး အနာဂါမ်အရိယာစခန်း တက်လှမ်းပြီး
ရှေးယခင်နှင့် လုံးဝမတူတော့၊ ယောဂီ ရဟန်းတစ်ပါးကဲ့သို့ပင်
ယခင်ကလို ချစ်ဇနီးအား အပြုံးနှင့်ပင် နှုတ်မဆက်တော့။
တစ်ယောက်တည်း စားပြီး ညချမ်းအခါ ကျက်သရေအခန်းမှာ
ဓမ္မဒိန္နာနှင့် အတူမအိပ်တော့ဘဲ သီးခြားညောင်စောင်းခင်းကာ
ထိုကဲ့သို့သော ချစ်သူမောင် ပြုမူဆက်ဆံလာသည်ကို ပထမတော့ ဓမ္မဒိန္နာ နည်းနည်းအံ့သြဖြစ်မိ၏။ နေ့စဉ် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာတော့ ဓမ္မဒိန္နာက သူ့အချစ်ကို အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ကြည့်၏။ ရွှေကို ဖယောင်းနှင့် စမ်းသပ်လို့ရ၏။
ဖယောင်းကို မီးနှင့်စမ်းသပ်လို့ရစကောင်း၏။ သို့သော် ဒီတကြိမ်တော့ ဓမ္မဒိန္နာသည် ချစ်သူမောင် အနာဂါမ် ဝိသာခသူဌေး၏ အချစ်ကို ဘာနဲ့မှ စမ်းသပ်လို့မရတော့။ သူမ စမ်းသပ်သည့်အရာတိုင်း ပေမမီ ကိုက်မပီဖြစ်လာတော့၏။ ဓမ္မဒိန္နာအဖို့ ချစ်ခြင်းတရားကို စမ်းသပ်ရ ဆန်းစစ်ရ ခက်ရှာလေတော့သည်။
တစ်ချိန်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြင်နာတွေ၊ ဂရုစိုက်ယုယမှုတွေ၊
ပြုံးပျော်စရာတွေ၊ နှလုံးသားပုံရိပ်လွှာတွေ၊ မမြင်နိုင်သည့်
ခိုင်ခံ့လှပါတယ်ဆိုသည့် သံယောဇဉ်တွေ၊ ကမ္ဘာဆုံးတိုင် မမုန်းနိုင် မမေ့နိုင် သတိရမယ်ဆိုသည့် စကားတွေကတော့ ဓမ္မဒိန္နာအဖို့ ကြယ်တွေကြွေသည့်ညပမာ ၊ တဖြေးဖြေးဝေးကွာသလို ခံစားရရှာလေတော့၏။
ဟိုယခင်ကလို လေပြေလေညှင်းလေး တရွရွသွေးချိန်မှာ ချစ်သူမောင် ဝိသာခထံမှ အချစ်ဝတ်ရည်များ ဆောင်ကျဉ်းမလာတော့ပေ။
ညချမ်းကာလ နုသက်တိုးဖွလှသည့် ခြေသံလေးများလည်း မကြားရတော့။ ချစ်ခြင်းတရားက ဓမ္မဒိန္နာအတွက် တူနှစ်ကိုယ် ကတ္တားခြားစေခဲ့သည်။ သူမဘဝမှာ ချစ်သူမောင်ထံမှ ဘာတစ်ခုမှ တုန့်ပြန်မှု မရတော့လေတော့ ရွှေနားတော်သွင်း ဧချင်းတွေလည်း နားဝင်မချိုတော့ပေ။ ဓမ္မဒိန္နာသည် ခံစားချက်တွေ တပိုးတနင့်ဖြင့် ချစ်သူမောင်ထံ ချဉ်းကပ်ပြီး ရှိခိုးဦးချကာ မေးရှာလေတော့သည်။
“အရှင့်သား ကျွန်မမှတစ်ပါး ပြင်ပ အခြားအမျိုးသမီး တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ မျှော်လင့်တောင့်တနေပါသလား၊
အရှင့်သားနှင့် ကျွန်မအကြား တစ်ယောက်ယောက်ကများ
သွေးထိုးထားလို့ပါလား၊ သို့တည်းမဟုတ် ကျွန်မမှာ တစ်စုံတစ်ရာ
အပြစ်ရှိပါသလား” ဟု သောကပရိဒေဝ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျလျှက်
မေးလေသည်။ အင်း ခက်တော့တာဘဲ၊ အကယ်၍ အဖြစ်မှန်ကို ပြောမပြလျှင် ဓမ္မဒိန္နာ ရွှေရင်နှစ်ခြမ်း ဖျန်းဖျန်းကွဲကာ သေပွဲဝင်ရှာရတော့မှာဘဲ ဟု အနာဂါမ် လင်တော်မောင် ဝိသာခ က သိလေသည်။ တဖက်ကလည်း လောကုတ္တရာတရားကို ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ သိပ်ကို ဝန်လေးလှပေ၏။ နောက်ဆုံးတော့ ဝိသာခသည် ဓမ္မဒိန္နာ ရင်ကွဲနာကျ သေမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့်
နှမ ဓမ္မဒိန္နာ ငါသည် မြတ်ဗုဒ္ဓထံတော်မှ တရားနာခဲ့ရသောကြောင့်
(အနာဂါမ်အဆင့်) လောကုတ္တရာတရားထူးရခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ တရားထူးရသူတို့မည်သည် ကာမဂုဏ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်
လောကီအပြုအမူများ ပြုလုပ်ဖို့ မသင့်တော်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် နှမ ဓမ္မဒိန္နာ မင်းဖက်က ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုဋေ ၄၀ သော ပစ္စည်းများ နှင့် ငါ့ဖက်က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် ကုဋေ ၄၀ သော ရွှေငွေရတနာ ပစ္စည်းများဥစ္စာ စုစုပေါင်း “ကုဋေ ၈၀” ကို မင်းဘဲ အပိုင်ယူကာ စီမံခန့်ခွဲပါတော့။
ငါသည် မင်းကို အမိအရာမှာဖြစ်စေ ညီမလေးအရာမှာ ဖြစ်စေ ၊
ထားကာနေပါ့မယ၊် ငါသည် မင်းကျွေးသည့် ထမင်းလေးဖြင့်
အသက်ဆက်ရုံ နေပါမယ် ဟု ပြောပြလေ၏။ အကယ်၍များ မိဘအိမ်သို့ ပြန်လိုက ပြန်ပါနော်။ သို့တည်းမဟုတ် နောက်အိမ်ထောင် ပြုလိုပါကလည်း ငါခွင့်ပြုပါတယ်ဟု ထပ်ဆင့်ပြောပြလေ၏။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ချစ်သူမောင် ဝိသာခ၏ စကားတို့သည်
မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ရသည့်အတွက် “ဓမ္မဒိန္နာ”ကလည်း
ပါရမီရှင်ပီပီ စဉ်းစားမိလေတော့၏။ ငါ့အရှင်သခင်၏ စကားတို့သည် ရှေးယခင်ကနှင့်မတူ၊ သာမန် အမျိုးသားသည် ဤကဲ့သို့သော စကားမျိုး ပြောရိုးထုံးစံမရှိ၊ တကယ်စင်စစ် ငါ့အရှင်သခင် လောကုတ္တရာတရားထူး ရလေပြီဟု ယုံကြည်သွားသောကြောင့် ဓမ္မဒိန္နာသည် ချစ်သူမောင် ဝိသာခကို မေးလေ၏။ အရှင်သခင် ရရှိသည့် တရားထူးမျိုးက
ယောကျာင်္းတွေသာ ရရိုးထုံးစံ ရှိပါသလော၊ သို့တည်းမဟုတ် အမျိုးသမီးတွေလည်း ထိုကဲ့သို့သော တရားမျိုး ရနိုင်ပါသလော ဟု မေးသောအခါ အမျိုးသမီးများလည်း ရနိုင်ကြောင်းကို “ဝိသာခ” က ပြန်လည်ရှင်းပြလေ၏။
ချစ်သူမောင် ဝိသာခ၏ စကားအဆုံး၌ ဓမ္မဒိန္နာသည် ဘိက္ခုနီ (ရဟန်းအမျိုးသမီး) အဖြစ် သာသနဘောင်ဝင်ရောင်ဖို့
ဝိသာခလည်း ဘုရင်ဗိမ္ဗိသာမင်းကြီးထံ ထပ်ဆင့်လျှောက်ထားပြီး
ဘုရင်မင်းတရားက အမွှေးနံ့သာဖြင့် ဓမ္မဒိန္နာအား ထုံမွှမ်းစေလျှက် အခြွေရံပရိတ်သတ်များစွာ ခြံရံစေကာ ဘိက္ခုနီမများ ကျောင်းတော်သို့ ဘိက္ခုနီဝတ်ဖို့ခွင့် ပို့ဆောင်စေတော်မူသည်။ ဘိက္ခုနီ ဓမ္မဒိန္နာသည်
ဆွေကြီးမျိုးကြီး သူဌေးသမီးဘဝမှ ဘိက္ခုနီဖြစ်လာသည့်အတွက်
သူမနေသည့် ကမ္မဌာန်းကျောင်းသို့ ဧည့်သည်ပြတ်သည်မရှိ။
တရားဓမ္မများ ကောင်းစွာ အားထုတ်လို့ မရနိုင်ဖြစ်လေ၏။
ထိုသို့ဖြစ်သောအခါ ဘိက္ခုနီဓမ္မဒိန္နာသည် လူသူကင်း၍ ဆိတ်ငြိမ်ရာ အရပ်၌ တစ်ပါးတည်း တရားအားထုတ်တော်မူသောအခါမှသာလျှင်
အာသဝေါကင်းကွာ “ရဟန္တာထေရီမကြီး” ဖြစ်သွားလေတော့သည်။။
အမှန်စစ်စ် ဓမ္မဒိန္နာသည် ခေသူတော့မဟုတ်ပါ။ သမိုင်းဝင် ဘိက္ခုနီမ တစ်ပါးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် အတိတ်ဘဝ ကမ္ဘာတစ်သိန်းထက်က ပွင့်တော်မူသော “ပဒုမုတ္တရဘုရားရှင်”၏ အဂ္ဂသာဝက တစ်ပါး
ဖြစ်တော်မူသော “ရဟန္တာအရှင်မြတ် သုဇာတ မထေရ်ထံ”တွင်
အလှူဒါနများ အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်လျှက် အရဟတ္တမဂ် အရဟတ္တဖိုလ် ရရှိရန်ဆုပန်ခဲ့ဖူးလေ၏။
ထို့အပြင် ဓမ္မဒိန္နာသည် “ကဿပဘုရားရှင်”၏ က်ထက်တော်အခါကလည်း
ကာသိတိုင်း “ကိကီမင်းကြီး၏ သမီးတော် အပျိုဖော် ခုနစ်ဦး” တွင်လည်း တစ်ဦး အပါဝင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
(၁) သမဏီ၊ (၂) သမဏဂုတ္တာ၊
(၃) ဘိက္ခုနီ၊(၄) ဘိက္ခုဒါယိကာ၊
(၅) ဓမ္မာ၊ (၆) သုဓမ္မာ၊ (၇) သံဃဒါယိကာ(သံဃဒါယီ)
ဟူသော ညီအစ်မ ခုနစ်ဖော်တို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုညီအစ်မ ခုနစ်ဖော်တို့သည် အိမ်ထောင်မပြုဘဲ အပျိုစင်ဘဝဖြင့်
နေကာ ကောမာရိဗြဟ္မစရိယ အကျင့်ကို တစ်သက်လုံး ဖြင့်ကျင့်၍
လည်းကောင်း ဘုရားရှင်နှင့် ဘုရားရှင်၏ တပည့်ရဟန်းတော်များအား
ကိကီမင်းကြီး၏ သမီးတော်ခုနစ်ယောက်တို့တွင် ဤဂေါတမ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါ၌
♦“သမဏီ” ကား “ခေမာထေရီ”၊
♦“သမဏဂုတ္တာ” ကား “ဥပ္ပလဝဏ္ဏာထေရီ”၊
♦“ဘိက္ခုနီ” ကား “ပဋာစာရာထေရီ”၊
♦“ဘိက္ခုဒါယိကာ” ကား “ကုဏ္ဍလကေသီထေရီ”၊
♦“ဓမ္မာ” ကား “ကိသာဂေါတမီထေရီ”၊
♦“သုဓမ္မာ” ကား “ဓမ္မဒိန္နာထေရီ”
♦“အငယ်ဆုံး သံဃဒါယီ” ကား “ဝိသာခါ”
ထို ညီအမခုနစ်ဖော်လုံး ဂေါတမဘုရားရှင် လက်ထက်တော်၌
ဧတဒဂ်ရာထူး ဌာနန္တရ အသီးသီး ရရှိခဲ့ကြလေသည်။
ထိုထေရီ ခုနစ်ပါးတို့တွင် ဓမ္မဒိန္နာကား ဘိက္ခုနီမ အားလုံးတွင်
“တရားဟော အကောင်းဆုံး ဓမ္မကထိက ဧတဒဂ်”ကို
“စူဠဝေဒလ္လသုတ်”ကို ယခင်က ချစ်သူမောင် အနာဂါမ်
သူဌေးသား ဝိသာခအား ဟောကြားပြီးသည့်အဆုံး၌ မြတ်ဗုဒ္ဓက ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။
အမှန်စင်စစ် စူဠဝေဒလ္လသုတ်ကို ရှင်မ ဓမ္မဒိန္နာထေရီသည်
ရဟန္တာဖြစ်ပြီးနောက် တစ်ချိန်က သူ၏လင်တော်မောင် ချစ်သူ
အနာဂါမ်တည်သွားသည့် ဝိသာခ သူဌေးက မေးသည့် ပုစ္ဆာများကို ဖြေရှင်းဟောကြားသော သုတ်ဖြစ်သည်။ ဝိသာခ သည် သောတာပန် သကဒါဂါမ် အနာဂါမ် အဆင့်နှင့် ဆိုင်သော အမေးပုစ္ဆာများကို ဦးစွာမေးလေသည်။ ထိုမေးမေးသမျှ အောက်မဂ်အောက်ဖိုလ် သုံးပါးနှင့်ဆိုင်သည့် အမေးပုစ္ဆာများကို ဓမ္မဒိန္နာထေရီက ရှင်းလင်းပြတ်သွားစွာ ဖြေကြားလေသည်။ တဆင့်တက်ပြီး ဝိသာခ က ဓမ္မဒိန္နာအား အရဟတ္တမဂ် ၊အရဟတ္တဖိုလ် အဆင့်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းကို
မေးသောအခါ ဓမ္မဒိန္နာက သိတော်မူလိုက်သည်။
ဝိသာခသည် အနာဂါမ်အဆင့်သာဖြစ်သေးပါလျှက် အသင်ဟာ
အဆင့်ကျော်ပြီး မေးသည်။ ဤအနာဂါမ်အဆင့်တန်းဆိုင်ရာ
မေးခွန်းလောက်ပင် ရပ်ထားပါလော့ဟု ပြောလေတော့၏။
ဝိသာခသည် ရဟန္တာအဆင့်ဆိုင်ရာ ပုစ္ဆာများကို မေးသော်လည်း
ဓမ္မဒိန္နာက ဖြေကြားသောအခါ သူ-ဥာဏ်လိုက်မမှီတော့ပေ။
ထိုအဖြေကို မြတ်ဗုဒ္ဓအား ဆက်လက် မေးပါရန် ဓမ္မဒိန္နာက ဝိသာခ အား ဆက်လက်ပြောကြားလေသည်။
ဝိသာခသည် မြတ်ဗုဒ္ဓအား ထိုအကြောင်းကို မေးလျှောက်သောအခါ
“အကယ်၍ ငါဘုရားရှင် ဖြေဆို ဟောကြားလျှင်လည်း ဓမ္မဒိန္နာဖြေဆို ဟောကြားသကဲ့သို့ပင် ဖြေဆိုဟောကြားမည်”ဟု မိန့်တော်မူသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓက “ဓမ္မဒိန္နာဟာ အလွန်ပညာရှိပါပေတယ်” ဟု ချီးကြူးတော်မူပြီး ဓမ္မကထိက ဧတဒဂ်ဘွဲ့ထူးကို ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့လေသည်။ ဤ “စူဠဝေဒလ္လသုတ်”သည် “ဘိက္ခုနီ ဓမ္မဒိန္နာ” ဟောကြားသော သုတ်ဖြစ်သောကြောင့် “သာဝကဘာသိတသုတ်”(မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တပည့် ဟောကြားသည့် သုတ်တော်) ဟု မမှတ်ယူသင့်ပေ။ ဇိနဘာသိတ ဗုဒ္ဓဘာသိတ(ဘုရားဟော) သုတ်တော်ဟူ၍ပင် မှတ်ယူရပေမည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရင်မင်းမြတ်သည် သူကိုယ်တိုင် မရေးသားဘဲ မင်းတံဆိပ်ခတ်နှိပ်လျှက် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ဟူသမျှကို မင်းမိန့်ဟု ခေါ်ဆိုရသကဲ့သို့ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ဖြင့် တိုက်ဆိုင်ပြီး ငါဘုရားဟောလျှင်လည်း ဤဓမ္မဒိန္နာ ဟောသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်မည်ဟု အတည်ပြု ထောက်ခံတော် မူခဲ့သောကြောင့် “ဇိနဘာသိတ ဗုဒ္ဓဘာသိတ သုတ်” ဟူ၍ပင် မှတ်ယူရပေမည်။
အရင်းစစ်တော့ “အမိမြေက” ဆိုသကဲ့သို့ အရင်းစစ်တော့ ဓမ္မဒိန္နာသည် “ချစ်သူစိမ်း၍ ”သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ကာ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားသောကြောင့် ချစ်ဒုက္ခအားလုံး ငြိမ်းရခြင်းဖြစ်၏။ တစ်ချိန်ကတော့ ဓမ္မဒိန္နာသည် သူ့ချစ်သူ ဝိသာခသူဌေးသားနှင့်
လက်တွဲခွင့်ရဖို့ စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် စောင့်စားခဲ့ရပေလိမ့်မည်။
ခေတ်စကားနှင့်ဆိုရင် အချစ်တွေ ရဖို့ အမုန်းတွေပေးဆပ်ခဲ့ရပေမည်။
အလင်းရောင်တွေရဖို့ အမှောင်ညတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေလိမ့်မည်။
ယခုတော့ ဓမ္မဒိန္နာအဖို့ ချစ်သူစိမ်းရက်လို့ ကျန်ရစ်တဲ့
ခါးသည်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ အချစ်ဝေဒနာ သူမမှာ မရှိတော့ပေ။
ဟူသော ချစ်သူဘုံကို ပြန်လည် ဆုံတွေ့ရန် ရှင်မ ဓမ္မဒိန္နာအဖို့ အိပ်မက်ဖြင့်ပင် မျှော်လင့်မှု မရှိတော့ပေ။ အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပန် ကာလသုံးပါးလုံး အချစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ပူပင်ကြောင့်ကြမှုမျိုး မရှိတော့။ အလွန်ငြိမ်းချမ်းလေစွ။
ရှင်မ ဓမ္မဒိန္နာသည် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် “အချစ်ကြောင့် ပူဆွေးသောက ရောက်ရ၏။ အချစ်ကြောင့် ဘေးဒုက္ခဖြစ်ရ၏။ အချစ်မှ လွတ်မြောက်သော သူအား စိုးရိမ်သောက ဘေးဘယ ဘယ်သောအခါမှ မရှိ။ ” ဟူသော ဒေသနာကို ပြန်လည်ကြားယောင်ရင်း ရှိလေတော့သည်။
(မှတ်ချက်။ ဓမ္မဒိန္နာထေရီ ဝိသာခအား
ဟောကြားတော်မူခဲ့သည် စူဠဝေဒလ္လသုတ်မူရင်း ပါဠိတော်ဖြစ်စေ၊
ဆဌသင်္ဂါယနာမူ မြန်မာပြန်ဖြစ်စေ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ကြပါကုန်။)
Dhamma Dãna Source ►
Posted by Alex Aung at 11:40 AM No comments:
Different Methods of Contraception ပဋိသန္ဓေတားနည်းများ
(၁) Combined Oral Contraceptive (COC) pill ဆေးနှစ်မျိုးတွဲ စားဆေးများ
(၂) Progestogen-only pill (POP) ဟော်မုန်း တမျိုးထဲပါတားဆေး
(၃) Depo-Provera (ဒီပို) ထိုးဆေး
(၄) Male condom ကျား (ကွန်ဒွမ်) များ၊
(၅) Female condoms အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်)
(၆) Emergency contraception အရေးပေါ် တားဆေး၊
(၇) Contraceptive patch အရေပြား ကပ်ထားရတဲ့ ဆေးကပ်ခွါ၊
(၈) Diaphragms and caps သားအိမ်အဝ အဖုံးများ၊
(၉) Centchroman ဟော်မုန်းမပါတဲ့ စားဆေး၊
(၁ဝ) Contraceptive implant အရေပြားအောက် ထည့်ထားရတဲ့ ဆေးချောင်း၊
(၁၁) Intrauterine Contraceptive Device (IUCD or IUD) သားအိမ်ထဲထည့် ပစ္စည်း၊
(၁၂) Spermicides သုက်ပိုး သတ်ဆေး၊
(၁၃) Vaginal rings သန္ဓေတား သားရေကွင်း
(၁၄) Male and female sterilization ကျား-မ သားကြောဖြတ်ခြင်း၊
(၁၅) Intrauterine system (IUS)သားအိမ်ထဲထည့် တာရှည်ခံဆေး၊
(၁၆) Natural family planning သဘာဝနည်းများ၊
• Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း၊
• Withdrawal method ပြင်ပစွန့်ထုတ်နည်း၊
• Breastfeeding ကလေးနို့တိုက်ခြင်းနည်း၊
(၁၇) Contraceptives Analysis တားဆေး-တားနည်းများ ဆန်းစစ်ချက်များ
လူအများဆုံးသုံး၊ ဝယ်လို့လဲလွယ်၊ ဈေးလဲ မကြီးဘူး။ နာမည်တွေ များတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မြားကပ်၊ လက်ညှိုကပ်ဆိုပြီး ခေါ်ကြတယ်။ (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတိုဂျင်) ဟော်မုန်း နှစ်မျိုး ပူးတွဲပါတယ်။ မ-မျိုးဥအိမ်ကနေ လတိုင်း ထွက်ရမဲ့ မ-မျိုးဥ ထွက်မလာအောင် တားဆီးပေးတယ်။ သားအိမ်အဝရှိတဲ့ ချွဲရည်ကို ထူပြစ်စေတာမို့ မ-မျိုးဥ ထွက်စေအုံးတော့ ကျား-သုက်ပိုးနဲ့ တွေ့ဘို့ ခက်ခဲစေပြီး၊ သားအိမ်အတွင်း နံရံကို ပါးစေတာကြောင့်လည်း သန္ဓေဟာ သားအိမ်မှာ လာမကပ်နိုင်ဘူး။
စနစ်တကျသုံးရင် ၉၉% စိတ်ချရတယ်။ လစဉ်ရာသီ စတင်လာတဲ့နေ့ကစ ဆေးသုံးရမယ်။ တကပ်မှာ ၂၈ လုံးပါတယ်။ ၂၁ လုံးက အရောင်တမျိုး၊ ၇ လုံးက အရောင်တမျိုး။ ၂၁ ရက်ကြာ နေ့တိုင်း ၁ ပြား သောက်ပါ။ နောက်ဆုံး သောက်ရမဲ့ အရောင်မတူတဲ့ ဆေးပြား ၇ ပြားဟာ အားဆေးသာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ၇ ရက်အတွင်း သွေးပြန်ဆင်းမယ်။ သွေးဆင်းတာ နည်းမယ်။ ရက်လည်းတိုမယ်။ သွေးဆင်းရက် မှန်မယ်။ ရာသီမလာခင် ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ နည်းတယ်။ ဝက်ခြံ၊ အလုံး-အကျိတ်၊ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ မဟုတ်တာအတွက်လဲ သုံးနိုင်တယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့-အန်၊ ကြားရက်သွေးဆင်း၊ ရင်သားတင်း၊ ရှားရှားပါးပါး သွေးဖိအားတက်တာ၊ သွေးခဲတာ၊ သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာတို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်၊ အသက် ၃၅ ကျော်ရင်၊ အဝလွန်ရင်၊ သွေးခဲတတ်တဲ့ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ (မိုင်ဂရိန်း) ရောဂါ၊ အသဲ-သဲခြေရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေရင် မသုံးသင့်ပါ။
Progestogen ခေါ် မ-ဟော်မုန်း တမျိုးတည်းပါတဲ့စားဆေး ဖြစ်တယ်။ Minipill လို့လဲခေါ်တယ်။ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ သားအိမ်အဝရှိ ချွဲကျိတဲ့အရည်က ပြစ်စေးလာလို့ သုက်ပိုးကို သားအိမ်ထဲ မဝင်စေအောင် တားတယ်။ သားအိမ် အတွင်းသား နံရံကို ပါးလွှာစေလို့ သန္ခေဥ တွယ်ကပ်တာကိုလည်း တားတယ်။ သတိထားသုံးရင် ၉၉% ထိရောက်တယ်။ ရာသီ စဆင်းတဲ့ရက်ကစပြီး တနေ့ ၁ ပြားသောက်ပါ။ နေ့တိုင်း သောက်နေကျအချိန်မှာ အချိန်တူသောက်ပါ။ ဆေးကပ်တခုကုန်ရင် နောက်ကပ်သစ်တခု စသောက်ပါ။ ရာသီက ၂ လမှ တခါသာလာမယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်-ဖျက်သူတွေလဲ သွေးဆင်းတဲ့ ပဌမရက်နေ့မှာ ဆေးပြားစသောက်ပါ။
ကလေးနို့တိုက်နေချိန်လဲ သောက်နိုင်တယ်။ ဆေးဖြတ်တာနဲ့ ကလေးပြန်ရဘို့ လွယ်တယ်။ ရာသီနဲ့ဆက်စပ်နေမဲ့ Sickle cell disease ရောဂါနဲ့ Dermatitis ရောဂါတွေကို ကုသရာမှာ သုံးနိုင်တယ်။ သွေးဆင်နည်းလို့ သွေးအားနည်းတာ သက်သာမယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်သူတွေလဲ သောက်နိုင်တယ်။ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေအတွက် စိတ်ချနိုင်တယ်။ သွေးခဲတာ နည်းတယ်။ PID တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေရောင်တဲ့ ရောဂါကို အဖြစ်နည်းစေ တာတော့ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲတားဆေးနဲ့ အတူတူဘဲ။
ခါတိုင်းဆေးသောက်ချိန်ထက် ၃ နာရီ နောက်ကျသွားရင် ၄၈ နာရီ အတွင်း အတူမနေပါနဲ့။ နေဖြစ်ရင် အရေးပေါ်တားဆေး သောက်ပါ။ တရက်နောက်ကျသွားရင် နောက်ရက်မှာ ဆေး ၂ လုံး သောက်ပါ။ ၄၈ နာရီ အတူမနေပါနဲ့။ ဒါမှမဟုတ် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။ ဆေးတကပ် ကုန်တာနဲ့ ရာသီ လာလာ-မလာလာ၊ နောက်ဆေးတကပ် ဆက်သောက်ပါ။ အတူမနေဖြစ်သေးလဲ ဆက်သောက်ပါ။ ၁-၇ ရက်အထိ နောက်ကျရင် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။ ဆေးသောက်ပြီး ၂ နာရီအတွင်း အန်ရင် နောက် ၁ လုံးသောက်ပါ။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ဆေးစသောက်ကာစ အစောပိုင်းလတွေမှာ ရာသီ တချို့နည်းမယ်၊ တချို့များတယ်။ ရာသီ မလာဘဲနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဝက်ခြံထွက်မယ်၊ ပျို့ချင်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ရင်သားတင်း-နာမယ်၊ လူက ဝလာနိုင်တယ်။ ဆီးချိုရှိနေသူတွေ သတိထားပေးရမယ်။ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အတက်ရောဂါ၊ (မိုင်ဂရင်း) ရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ ပန်းနာရှိသူတွေက သတိထားသောက်ရမယ်။ လိင်စိတ်နည်း၊ စိတ်မူပြောင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျ။
Norethindrone ပါတဲ့ဆေးတွေက Ortho Micronor, Errin, Aygestin, Nor-QD, Camila, Jolivette, Nora-BE ဖြစ်တယ်။ Norgestrel ပါတဲ့ဆေးက Ovrette ဖြစ်တယ်။
Progestogen ဟော်မုန်းတမျိုးတည်းပါတဲ့ ထိုးဆေးဖြစ်တယ်။ Depo-Provera 150mg ၃ လခံ၊ Noristerat ၂ လခံ၊ အမျိုးအစားတွေရှိတယ်။ ၃ လခံကိုသာ လူသုံးများတယ်။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ နို့ထွက်မနည်းစေဘူး။ ရာသီမဆင်းခင် ခံစားရတာတွေ သက်သာတယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိနေရင်၊ ဆေးဖြတ်ပြီးနောက် ၁ နှစ်အကြာ ကလေးလိုချင်ရင်၊ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ရှိရင်၊ ယခု ဒါမှမဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ရင်သား-ကင်ဆာရှိရင်၊ ဆီးချိုရောဂါရှိရင်၊ (မိုင်ဂရင်း) ရောဂါရှိရင် မသုံးသင့်ဘူး။
Depo Provera ကို ၇ နှစ် ကြာထိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီးပေါင်း ၄ဝဝဝ လောက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။
• ၅% ကျော်ကျော်မှာ ရာသီမမှန် (နည်းသူ + မလာသူ)၊ ဗိုက်နာ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ပြောင်းလဲ၊ ခေါင်းမူး၊ စိုးရိမ်၊
• ၁% ကနေ ၅% ဆက်ဆံလိုစိတ်နည်း၊ ဆက်ဆံလိုစိတ်ပို၊ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာ၊ ခါးနာ၊ ရင်သားနာ၊ ခြေထောက်နာ၊ စိတ်ကျ၊ အနီပြင်ထွက်၊ ပျို့၊ အိပ်မပျော်၊ အဖြူဆင်း၊ ခြေထောက်ယောင်၊ ဝက်ခြံထွက်၊
• ၁% ထက်နည်းသူတွေမှာ အသားဝါ၊ ဆီးလမ်း-မွေးလမ်းရောင်၊ တက်၊ အစားပျက်၊ ဝမ်းမမှန်၊ ဝမ်းသွေးပါ၊ ဆက်ဆံချိန်နာ၊ ရင်ပတ်နာ၊ အလာဂျီရ၊ အိပ်ချင်၊ ဖျား၊ ချမ်း၊ အသားအရေခြောက်၊ ပန်းနာ၊ ရင်ခုန်မြန်၊ ချွေးပိုထွက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ လေဖြတ်၊ ရေငတ်၊ အသက်ရှူမဝ၊ ရာသီလာစဉ်နာ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသလို ခံစား၊ မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးပြန်မရ၊ သွေးပြန်ကြောရောင်၊ နို့ထွက်နည်း၊ ရင်သားအရွယ်ပြောင်း၊ ရင်သားထိပ်က သွေးထွက်၊ ရင်သားကင်ဆာ။
ကျား-သုက်ပိုးတွေကို မ-မျိုးဥနဲ့ မတွေ့စေအောင် ကြားခံပေးထားတဲ့ အဆီးအတားမျိုးဖြစ်တယ်။ Latex (Rubber) or Polyurethane (Plastic) ပစ္စည်း တမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သုံးတတ်ရင် ၉၅-၉၈% စိတ်ချရတယ်။ HIV-AIDS အပါအဝင် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်တယ်။
အင်္ဂါချင်း မထိစပ်မီ၊ မာတင်းလာတဲ့ ကျားရဲ့ အင်္ဂါကို ကျကျနန စွပ်ဖုံးထားပြီး သုံးရမယ်။ အဆုံးသပ်ရင် ကျားအင်္ဂါ လုံးဝ နဂို အနေအထားကို ပြန်မရောက်ခင် ချွတ်ယူရမယ်။ တခုဟာ တခါသုံးသာ ဖြစ်တယ်။
အမျိုးသမီးရဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း (ဗဂျိုင်းနား) ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာ အဝကိုအပြင်၊ အပိတ်ကိုအတွင်းမှာ အနေအထားနဲ့ ထည့်သွင်းရမယ်။ ဆက်ဆံမှုပြီးဆုံးရင် အပြင်အဝကို စုစည်းပိတ်ပြီး၊ အထဲရှိနေတဲ့ ကျားသုက်တွေ ဖိတ်မကျအောင် ပြန်ထုတ်ပြီး စွန့်ပြစ်ရမယ်။ သုံးနေတုံးမှာ အသံထွက်လို့ တချို့က မကြိုက်ဘူး။ ရောဂါတွေကာကွယ်နိုင်ပြီး ယောက်ျားက (ကွန်ဒွမ်) မသုံးတဲ့ အခါမျိုးအတွက် ကောင်းတယ်။ ဈေးချိုတဲ့ အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်) ကိုလည်း FDA က အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Ecee-2 ဆိုပြီးသုံးနေကြတယ်။ အတူနေပြီး မြန်မြန်သုံးလေ စိတ်ချရလေဖြစ်တယ်။ ၂၄ နာရီ အတွင်း သောက်ရင် ၉၅%၊ ၂၄-၄၈ နာရီအတွင်းသောက်ရင် ၈၅%၊ ၄၈-၇၂ နာရီအတွင်းသောက်ရင် ၅၈% စိတ်ချရတယ်။ ၅ ရက် (၁၂ဝ နာရီ) အထိ သုံးနိုင်ပေမဲ့ စိတ်ချရတဲ့ ရာနှုန်း မသိရသေးဘူး။ Progestin (Levonorgestrel) 1.5 mg တလုံး တကြိမ်တည်း၊ ဒါမှမဟုတ် 750 μg နှစ်ခါခွဲ သောက်နိုင်တယ်။ အမေရိကားမှာ Progestin-only pills (POPs), Plan B, Emergency contraception (EC), Emergency contraceptive pills (ECPs), Morning-after pill, Day after pills နာမည် အမျိုးမျိုးနဲ့ ခေါ်တယ်။ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ် နဲ့ အိန္ဒိယမှာ ECee2 နာမည်နဲ့ ရတယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ၂ဝ% ခေါင်းကိုက်၊ မူးချင်သလိုဖြစ်၊ ၁၄% ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာ၊ ၁၂% ပျို့၊ ရင်သားတင်း၊ ရာသီဆင်းရက် မမှန်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပျို့-အန်ခြင်သူတွေက အအန်သက်သာဆေး Vitamin B6, Avomin, Vomistop သောက်နိုင်တယ်။ ခေါင်းကိုက်ရင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Diclofenic, Ibuprofen တမျိုးမျိုး သောက်နိုင်တယ်။ ဆက်ပြီး ကာကွယ်လိုရင် အခြားနည်းတွေကို သုံးရမယ်။ RU486, Mifestone, Mifeprex တွေလို သားပျက်စေတဲ့ ဆေးမဟုတ်ဘဲ သန္ဓေ မတည်အောင်သာ လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။
ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ နေ့စဉ်သောက်ရတဲ့ Marvelon 28 (Desogestrel 0.15 mg and Ethinyl estradiol 0.03 mg) ကိုလဲ အရေးပေါ်အနေနဲ့ သုံးနိုင်တယ်။ ဆက်ဆံပြီးနောက် ၃-၅ ရက် အတွင်း၊ ၄ လုံး ချက်ချင်းသောက်ပါ။ ၁၂ နာရီခြာပြီး၊ နောက်ထပ် ၄ လုံး ထပ်သောက်ပါ။
အရေးပေါ်တားဆေးကို အရေးပေါ်အတွက်သာသုံးသင့်ပါတယ်။ ရာသီပြောင်းသွားမယ်။ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမယ်။ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ သုတေသန မပြည့်စုံပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်လိုနိုင်ငံတွေမျာသာ အဲလို ခဏခဏသောက်တယ်။ သုတေသနလုပ်မရဘူး။ စာတပုဒ်သပ်သပ် ရေးထားပါတယ်။
သေးငယ်ပြီး အရေပြားမှာကပ်ရတဲ့ ခပ်ညိုညို ဆေးကပ်ခွါဖြစ်တယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါ တားဆေး စားဆေးတွေလို အတူတူဘဲ။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ ရာသီဆင်းပြီးပြီးချင်း ကပ်ပါ။ အများဆုံး (၅) ရက် နောက်ကျနိုင်တယ်။ အနာမရှိ၊ အမွှေးမထူ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ (ရင်သားမှအပ) ဘယ်အရေပြားမှာမဆို ကပ်ထားပါ။ လတလမှာ ပဌမ ၃ ပတ်မှာကပ်ပါ၊ နောက်ဆုံး ၁ ပတ်မှာ ကပ်စရာ မလိုပါ။ တပတ်နားထားချိန်မှာ ရာသီဆင်းမယ်။ ရာသီ အဆင်းနည်းမယ်။ ရက်လည်း တိုနိုင်တယ်။ ပျို့-အန်ခြင်းမဖြစ်။ ကင်ဆာနဲ့ အလုံး-အကျိတ်ဖြစ်မှာ နည်းတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ရင်သားတင်းတာ၊ ကြားရက် သွေးဆင်းတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ခဲတဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = သွေးဖိအားတက်တာ၊ သွေးခဲတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၅ နှစ်ထက် ကြာကြာသုံးရင် သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ဖြစ်လေမလား သံသယရှိတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုရင် မသုံးရ၊ အသက် ၃၅ ကျော်ရင်၊ အဝလွန်ရင်၊ သွေးခဲတတ်တဲ့ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ (မိုင်ဂရိန်း) ရောဂါ၊ အသဲ-သဲခြေရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါတွေ ရှိနေရင် မသုံးသင့်။ ရေချိုး-ရေကူးရင်လည်း ကွာမကျတတ်ဘူး။ မတော်တဆ ကွာကျလို့ ၄၈ နာရီအတွင်း သိရင် ပြန်ကပ်နိုင်သည်။ ၄၈ နာရီ ကျော်သွားရင် အသစ်တခုဖြစ်ဖြစ် တခြား နည်းဖြစ်ဖြစ် သုံးပါ။
ကျား-သုက်ပိုးတွေကို မ-မျိုးဥနဲ့ မတွေ့အောင် ကြားခံပေးထားတဲ့ အဆီးအတားဖြစ်တယ်။ Latex (Rubber) or Polyurethane (plastic) တမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Diaphragms ဟာ ဆန့်နိုင်-ကြုံ့နိုင်တဲ့ အဖုံးလို ပုံပန်းရှိတယ်။ Caps က ပိုပြီး အရွယ်ငယ်တယ်။ သုက်ပိုးသတ်ဆေး Spermicide နဲ့ တွဲသုံးရင် ပိုထိရောက်တယ်။ ၉၂-၉၆% စိတ်ချရတယ်။ Silicone cap – Femcap က ပိုပြီးထိရောက်တယ်။ မဆက်ဆံမီ သုက်ပိုးသတ်ဆေးကို သားအိမ်ဝအဖုံး Diaphragm ပေါ်သုက်လိမ်းပြီး၊ မွေးလမ်းကြောင်း ဗဂျိုင်းနားထဲ ထည့်သွင်းပါ။ သားအိမ်ဝ Cervix ကို ဖုံးပိတ်စေရမယ်။ ၆ နာရီ ကြာအထိ ပြန်မထုတ်ရပါ။ ကြာကြာထားလည်း ရတယ်။
Saheli Tablets နာမည်နဲ့ အိန္ဒိယမှာရောင်းတယ်။ ဟော်မုန်း မပါဘူး။ မ-မျိုးဥကိုလဲ အလျင်အမြန်ရင့်စေတယ်။ Fertilized ovum မျိုးစပ်ထားတဲ့ မ-မျိုးဥကို သားအိမ်ထဲကို အလျင်အမြန်သွားစေလို့ သားအိမ် အတွင်းနံရံက အဆင်သင့် အဖြစ်သေးဘူး။ သားအိမ်အတွင်းနံရံကိုလဲ အလုပ်နှေးစေတယ်။ ဆေးတပြားမှာ 30 mg ပါတယ်။ တကပ်မှာ (၈) ပြား ပါတယ်။ ပဌမ (၃) လအတွက် တပတ်မှာ ၂ ပြား၊ နောက်လတွေမှာ ၁ ပတ် ၁ ပြား သောက်ရတယ်။
Ormeloxifene ဆေးကို Dysfunctional uterine bleeding ရာသီဆင်းမမှန်တာ၊ များတာ နဲ့ Advanced breast cancer နောက်ကျနေတဲ့ ရင်သား-ကင်ဆာအတွက်လဲ သုံးတယ်။ Mastalgia ရင်သားနာတာ နဲ့ Fibroadenoma ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သား အကျိတ်အတွက်လဲ သုံးတတ်တယ်။
ဆံညှပ်အရွယ်၊ ကွေးနိုင် ဆန့်နိုင်တဲ့ ပြွန်ချောင်းကလေးတခုဖြစ်တယ်။ လက်မောင်းအတွင်းဖက် အရေပြားအောက်မှာ ထုံဆေး-ပိုးသန့်ဆေးသုံးပြီး ထည့်ရတယ်။ Progestogen ဟော်မုန်းကို ၃ နှစ်ကြာ ထုတ်ပေးနေမယ်။ Implanon လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ၉၉% မက ထိရောက်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် များတွေသူတွေလည်း သုံးနိုင်တယ်။ ရာသီလာအပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့က စထည့်ထားရင် ချက်ချင်းထိရောက်တယ်။ နို့ထွက်မနည်းစေဘူး။ ရာသီမလာမီ လက္ခဏာတွေကို သက်သာစေတယ်။ ရာသီ မမှန်ဖြစ်တတ်သည်။ ဝက်ခြံထွက်၊ ရင်သားတင်းတတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိနေရင်၊ အသဲရောဂါ ရှိနေရင်၊ အခု ဒါမှမဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ရင်သားကင်ဆာရှိရင်၊ သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါရှိရင်၊ (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါ ရှိရင် မသုံးသင့်။
(၁၁) Intrauterine Contraceptive Device (IUCD or IUD) သားအိမ်ထဲထည့် ပစ္စည်း
သားအိမ်ထဲမှာ Plastic (ပလပ်စတစ်) ဒါမှမဟုတ် Copper (ကောပါး) ကြေးနီ နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းငယ်လေးတခု ထည့်ထားပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကျားသုက်ပိုးဟာ မ-မျိုးဥနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း မဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတယ်။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ တာရှည် (၃-၅-၁ဝ နှစ်) ကာကွယ်နည်းလဲ ဖြစ်တယ်။
ကြေးနီဓါတ်ပါတဲ့ (IUD) အသစ်တွေက ပိုပြီး ထိရောက်တယ်။ တတ်ကြွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေက ထည့်ပေးရတယ်။ သားအိမ်ထဲကို ပစ္စည်းထည့်လိုက်ပြီး အောက်ခြေ ကြိုးစလေးနှစ်ခုကို တိုအောင်ဖြတ်ပေးမယ်။ (IUD) ရှိနေဆဲ ဖြစ်တာကို စစ်ဆေး ကြည့်နိုင်သည်။ ထည့်ပြီးတာနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်တယ်။ ဟော်မုန်းမပါလို့ ဟောမုန်းဘေးထွက်ကျိုး မရှိပါ။ ၃ နှစ်ခံ၊ ၅ နှစ်ခံ၊ ၁ဝ နှစ်ခံ၊ ရှိတယ်။ ParaGard (Copper T), Mirena (LNG-IUS), Multiload CU375 နာမည် အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ ရာသီများတတ်တယ်။ စစ်ဆေးနေသင့်သည်။ ထွက်ကျတာ၊ နေရာပြောင်းတာလည်း တခါတရံ ဖြစ်တတ်တယ်။
Nonoxynol-9 ပါတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ Tablets, Jelly (Gel), Films, Foams အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ 71-82% ထိရောက်တယ်။ နာရီဝက် ကြိုတင်ထည့်ထားရမယ်။ ပျော်ဝင်မသွားတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ရင် ဆက်ဆံအပြီး ၈ နာရီကြာမှ ထုတ်ရမယ်။ Vaginal Contraceptive Film (VCF) က ၁၅ မိနစ်ဆိုရင် ရတယ်။ Suppositories တွေက ၂ဝ မိနစ် စောင့်ရမယ်။ Sponges တွေက ၈ဝ-၉၁% ထိရောက်တယ်။ ၁၂ နာရီ ကြိုတင် ထည့်ထားနိုင်ပြီး၊ ဆက်ဆံပြီးနောက် ၆-၈ နာရီကြာမှ ဖြုတ်ရမယ်။ တမျိုးတည်း သုံးတာထက် သားအိမ်အဝအဖုံးတွေ၊ သုက်ရည် ပြင်ပစွန့်ထုတ်နည်းတို့နဲ့ တွဲသုံးရင် ပိုထိရောက်တယ်။ အက်စစ်ဓါတ်ပါလို့ နှစ်ယောက်စလုံး ပူစပ်မယ်။
V-Rings လို့လဲ အတိုခေါ်တယ်။ အမျိုးသမီး မွေးလမ်းကြောင်း (ဗဂျိုင်းနား) ထဲမှာ ထည့်ပေးထားရတယ်။ ဆေးပါနေတဲ့ Polymeric devices (ပေါ်လီမက်ထရစ်) ပစ္စည်း ဖြစ်တယ်။ အချင်း ၂ လက္မရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်အတွက် မဟုတ်တာတွေလဲ သုံးတာရှိသေးတယ်။ သားရေကွင်းလို ပစ္စည်းကရော (ဗဂျိုင်းနား) အတွင်း နံရံကပါ ဆန့်နိုင်ကြုံ့နိုင်စွမ်းရှိလို့ ထွက်မကျစေအာင် ထိန်းထားနိုင်တယ်။ ရေချိုးတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာ ကိစ္စမရှိပါ။ ရှိနေတာ သေခြာချင်ရင် လက်ကို ဆေးကြောပြီး ကိုယ့်ဖါသာ စမ်းကြည့်နိုင်တယ်။
• NuvaRing ဆိုတာက Contraceptive vaginal ring ကိုယ်ဝန်တားပစ္စည်း ဖြစ်တယ်။ Poly-ethylene-co-vinyl acetate နဲ့ လုပ်ထားပြီး၊ Etonogestrel (Progesterone) နဲ့ Ethinyl estradiol (Estrogen) ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပေးနေတယ်။
• Femring ဆိုတာက သွေးဆုံးချိန်မှာ မျက်နှာတွေ နီမြန်းတာ၊ မွေးလမ်းကြောင်း ကြုံလှီတာတွေ သက်သာဘို့ Estradiol-acetate ဟော်မုန်း နဲနဲလေး ထုတ်ပေးနေမဲ့ Silicone elastomer ကနေလုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ လင်မယား အတူမနေခင် ခဏထုတ်ထားနိုင်တယ်။
(၁၅) Intrauterine system (IUS) သားအိမ်ထဲထည့် တာရှည်ခံဆေး၊
T ပုံရှိတဲ့ ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ Progestogen ဟော်မုန်းကို တဖြေးဖြေး ထုတ်ပေးနေတဲ့ ဆေးဖြစ်တယ်။ ၅ နှစ် အထိခံတယ်။ Mirena ဟုခေါ်သည်။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ ရာသီစဆင်းတဲ့နေ့က နောက် ၅ ရက်အကြာ ထည့်ရတယ်။ မွေးလမ်းမှာ ကူးစက်ပိုး မရှိမှ ထည့်ရမယ်။ (IUD) တွေကဲ့ကို မွေလမ်းကြောင်းထဲမှာ ကြိုးစလေးနှစ်ခု ရှိနေမည်။
ရာသီဆင်းရက် ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ ဝက်ခြံထွက်၊ ရင်သားနာတတ်တယ်။ ထွက်ကျတာ၊ နေရာ ပြောင်းတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် မသုံးရ။ သားအိမ်၊ မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာရှိနေရင်၊ ရင်သား ကင်ဆာရှိရင်၊ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါရှိရင်၊ (မိုင်ဂရင်း) ရောဂါရှိရင် မသုံးသင့်။
(က) Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း၊ Standard Days method ရက်ရှောင်နည်း
လလယ်ရက်ဟာ မ-မျိုးဥထွက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ မ-မျိုးဥနဲ့ ကျား-သုက်ပိုး တွေ့မှသာ ကိုယ်ဝန်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် လလယ်ရက် မတိုင်ခင် ၅ ရက်နဲ့ နောက်ထပ် ၅ ရက်အမှာ အတူမနေသင့်ပါ။
(ခ) Withdrawal method (Pullout method) သုက်ရည် ပြင်ပစွန့်ထုတ်နည်း
ယောက်ျားက ဆန္ဒပြည့်ဝခါနီးမှာ လိင်အင်္ဂါကို အမျိုးသမီးရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကနေ ထုတ်ပြီးမှ သုက်ရည်ကို ပြင်ပမှာ ထွက်အောင် လုပ်ရတယ်။ စိတ်ကိုထိန်းထားတုံး သုက်ကောင်တွေ Sperm အနည်းငယ် ထွက်တာဖြစ်တတ်တယ်။ တချို့က ဆန္ဒမပြည့်ဝတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကျားသုက်ပိုး သတ်ဆေး Spermicide နဲ့ တွဲသုံးရင် ပိုမိုထိရောက်တယ်။
(ဂ) Breastfeeding ကလေး နို့တိုက်ခြင်းနည်း
ကလေးဖွါးပြီး ၆ ပတ်နေရင် နောက်ကိုယ်ဝန်ပြန်ရနိုင်တယ်။ ကလေးနို့တိုက်နေရင် ၃ လကနေ ၆ လအထိ သဘာဝနည်းနဲ့ သားဆက်ခြားနိုင်တယ်။ နို့တိုက်မိခင်ကိုလည်း ဟော်မုန်းလည်ပတ်မှု မှန်စေတယ်။ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်မှာကိုလည်း ကာကွယ်တယ်။ ကလေးကို ကိုယ့်နို့တမျိုးတည်းသာတိုက်ရမယ်။ အလုပ်သွားချိန်မှာ နို့ဗူးနဲ့ထားတာဆို စိတ်မချရဘူး။ ၁-၂% သာကိုယ်ဝန်ရစေတယ်။ ၃ လနောက်ပိုင်း ကာကွယ်မှု လျှော့လာတယ်။ တိတိကျကျဆိုရင် ၆ ပါတ်အထိက သေချာတယ်။
ရာသက်ပန် ကလေးမနိုင်တော့တဲ့နည်းဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေကို ထုံဆေးသုံးပြီး ကျားသုက်ပိုးတွေ ထွက်လာတဲ့ လမ်းကြောင်း တနေရာရာကို ဖြတ်ပြစ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်နဲ့ညာ နှစ်ဘက်လုံးကို ဖြတ်ရတယ်။ ဒါးရာ တချက်ထဲနဲ့လဲ ဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝဝ မှာ ၁ ယောက်မှာ မအောင်မမြင် ဖြစ်တတ်သည်။ ဖြတ်လိုက်တဲ့ အကြောကို မှန်ဘီလူးနဲ့ ဟုတ်-မဟုတ် စစ်မှ သေခြာတယ်။ လက်နဲ့ စမ်းရတာမှာ ဘေးက သွေးကြော၊ အဆီ၊ အာရုံကြောတွေနဲ့ ခွဲရမလွယ်ဘူး။ ထုံဆေးနဲ့ဆို ပိုမှားနိုင်တယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာဝန်ကိုသာ အားကိုးသင့်တယ်။
အမျိုးသမီးတွေကို သားကြောဖြတ်ရင် မေ့ဆေး၊ ခါးထုံဆေး တမျိုးမျိုးပေးပြီး၊ သားအိမ်ရဲ့ တဖက်တချက်ရှိတဲ့ သားအိမ်ပြွန် နှစ်ခုလုံးကို ဖြတ်ပြစ်ရတယ်။ ၂ဝဝ မှာ ၁ ယောက် မအောင်မမြင် ဖြစ်တတ်တယ်။ ခွဲစိတ်ပြီး ၁ လ အထိ တခြားတားနည်း တခုခု သုံးသင့်တယ်။ ယောက်ျားကို ဖြတ်ရင် သုက်ရည်လဲမှာ သုက်ပိုး ပါ-မပါ စစ်ဆေးရမယ်။ သုတေသန စစ်တမ်းအရ အသက် ၃ဝ အောက် အမျိုးသမီးတွေက ယောက်ျားတွေထက် ဒီနည်းသုံးပြီးနောက် နောင်တရကြတယ်။
(၁၇) တားဆေး-တားနည်းများ ဆန်းစစ်ချက်များ
ထိရောက်မှု အများဆုံး တားဆေး-တားနည်းများ
• Implant အရေပြားအောက် ဆေးချောင်း၊ IUD သားအိမ်ထဲထည့် ပစ္စည်း၊ Vasectomy, Tubal methods သားကြောဖြတ်ခြင်းများ = 99%
• Birth Control shot ထိုးဆေး = 97%
• Birth Comtrol Pill စားဆေး၊ Vaginal Ring (ဗဂျိုင်းနား) ကွင်း = 92-95%
• Condom (ကွန်ဒွမ်)၊ Diaphragm, Cervical Cap သားအိမ်ဝအဖုံး-အပိတ်၊ Sponge ဆေးမြှုပ် = 84-89%
• Abstinence ဝေရာမဏိ = ၁ဝဝ%
ထိရောက်မှု အနည်းဆုံး တားဆေး-တားနည်းများ
• No Birth Control အကာအကွယ် လုံးဝမသုံးခြင်း = 85%
• Spermicide only သုက်ပိုးသတ်ဆေး တမျိုးတည်း = 29%
• Fertility Awareness နေ့ကောင်းရက်သာ ရွေးနည်း = 25%
• Female Condom အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်) = 21%
• Withdrawal သုက်ရည် အပြင်စွန့်ထုတ်နည်း = 18%
WHO Family Planning Handbook for Providers, 2007 တားဆေး-တားနည်းများနှင့် ကိုယ်ဝန်ရနှုန်း တနှစ်တာ ဆန်းစစ်ချက်
• အကာအကွယ် မသုံးသူ = ၈၅% ကိုယ်ဝန်ရမယ်။
• သုက်ပိုးသေဆေးနည်းသုံးသူ = ၁၈-၂၉% ကိုယ်ဝန်ရမယ်။
• သုက်ရည် ပြင်ပစွန့်ထုတ်နည်းသုံးသူ = ၁၅-၂၈% ကိုယ်ဝန်ရမယ်။
• ရက်ရှောင်နည်းသုံးသူ = ၅-၁၂% ကိုယ်ဝန်ရမယ်။
• ကွန်ဒွမ်နည်းသုံးသူ = ၂-၁၅% ကိုယ်ဝန်ရမယ်။
• နေ့စဉ်သောက်ရတဲ့ဆေးသောက်သူ = ဝ့၃-၈% ကိုယ်ဝန်ရမယ်။
• ထိုးဆေးထိုးသူ = ဝ့ဝ၅-၃% ကိုယ်ဝန်ရမယ်။
• တရုတ်နိုင်ငံမှာရနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်တားဆေးတွေ = Ai Wu You, An Ting 0.75, An Ting 1.5, Bao Shi Ting (Postinor-2, 0.75 mg), Bao Shi Ting 1.5, Dan Mei (0.75 mg), Dan Mei (1.5 mg), Hui Ting 0.75 mg Hui Ting 1.5 mg, Jin Xiao (0.75 mg), Jin Xiao (1.5 mg), Jin Yu Ting, Ka Rui Ding, Le Ting, Nuo Shuang, Xian Ju, Yi Ting, Yu Ping, Yu Ting,
• တရုတ်နိုင်ငံမှာရနိုင်တဲ့ Mifepristone ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးတွေ = Bi Yun (10 mg), Bi Yun (12.5 mg), Fu Nai Er (10 mg), Fu Nai Er (25 mg), Hou Ding Nuo (10 mg), Hou Ding Nuo (25 mg), Hua Dian (10 mg), Hua Dian (25 mg), Si Mi An (10 mg), Si Mi An (25 mg)
• အိန္ဒိယမှာရနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်တားဆေးတွေ = E Pills, i-pill, Preventol, ECee2, Pill 72
• မြန်မာနိုင်ငံမှာရနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်တားဆေးတွေ = ECee2, Pill 72
• ထိုင်းနိုင်ငံမှာရနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်တားဆေးတွေ = Madonna
• စင်္ကာပူမှာရနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်တားဆေးတွေ = Postinor-2®, Estinor®, kNorlevo®
• စင်္ကာပူမှာရနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်တား ကပ်ခွါဆေး = Ortho Evra® (6 mg Norelgestromin and 600 micrograms Ethinyl estradiol transdermal patch)
Posted by Alex Aung at 1:50 PM No comments:
ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ကူးပြောင်းရာ၌ သာမန်ပြည်သူလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍ (၄)
ပညာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပြည်သူများအနေဖြင့် နေ့စဉ်ဘဝများအတွင်း ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင် ရှေ့ဆောင် ဦးရွက်ပြုပြီး မျှမျှတတရှိစွာ ပြုမူကျင့်ဆောင်၍ ဘဝကို နေပျော် ကြီးပွားစေနိုင်ကြသည်။ လူတွေအနေဖြင့် တင်းကျပ်ဖိစီးသော၊ ဘုရားသခင် ပေးအပ်သော အာဏာရှိနေပုံ ဖမ်းထားသည့် အာဏာပိုင်များ ဆိုသည့်အပေါ် ပို၍ မေးခွန်း ထုတ်ဖွယ် ရှိလာသော အဖြေကို ရရှိလာကြသည်။
ဒီမိုကရေစီ အိုင်ဒီယာကို မရခဲ့သေးဟုဆိုလျှင်လည်း ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်မှု စံတန်ဖိုးများ ပိုကျယ်ပြန့် ထွက်ပေါ်လာစေဖို့ ဖန်တီးလာကြရန် ရှိလာပါသည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ်ခွင့်၊ ကိုယ်တိုင်အစိုးရရ နေပိုင်ခွင့်များသည် တကမ္ဘာလုံးဆောင် ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောကြောင့်ဟု ဆိုရမည်ပင်ဖြစ်သည်။ ရှင်သန်ရန် လိုအပ်ချိန်၌ လိုအပ်ချက်ကို တွဲယှက်ဖြည့်စွမ်းနိုင်ခြေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ငြား ပိုလုံခြုံရှင်သန်ရေး ပိုလိုအပ်လာချိန်တွင်တော့ ဦးစားပေးလည်း ပိုမြင့်လာမည်မှာ အမှန်ပင်။
ဒီမိုကရေစီကို အင်စတီကျူးရှင်း သဘောမှ သတ်မှတ်ထုတ်ဖော်ရာ၌ လွန်ခဲ့သော နှစ်၂၀၀ အတွင်း အနောက်တိုင်း နိုင်ငံရေး သမိုင်းထွက်ကုန် တရပ်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် (ဤသို့သော်သည် အရေးကြီးလှ၏) လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်လိုကြသော လူသား၏ဆန္ဒ။ ဒါသည်ပင် ဒီမိုကရေစီအတွက် လှုံ့ဆော်သည့် အဟုန်ကြီးတရပ်၊ အခြေခံကျကျ ဖြစ်လိုစိတ်တရပ် ဖြစ်ပါ၏။ ဒါသည်ပင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင် ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ မြင့်တက်လာစေရန် လှုပ်ရှား မှုရင်းမြစ်တို့ ချဲ့ထွင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် (လူ့ဝန်းကျင်) ၏ သဘာဝ ထွက်ကုန်တရပ်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
အီလစ်တို့အနေဖြင့် ပါဝါကို တတ်အားသရွေ့ ထိန်းသိမ်းကြရေး အများအားဖြင့် နှစ်ခြိုက်ရွေးချယ်ကြသည်။ လူတွေလိုချင် ရုန်းကြွ၍ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ တဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်ပေါ်ထွန်းလာနေခဲ့ကြသည်။ ၁၈ ရာစု လစ်ဘရယ် တော်လှန်ရေးများမှသည် ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်း ဒီမိုကရက်တစ် တော်လှန်ရေးများအထိ ဖြစ်သည်။ ယခင်လူတွေ၏ ခံစားမှုလှုံ့ ဆော်အားပေးချက်များနှင့် စံတန်ဖိုးတို့က အရေးကြီး အခန်းကဏ္ဍ တရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့မှာတော့ ပိုမို အရေးကြီးကဏ္ဍ ဖြစ်လာသည်။
ကမ္ဘာ့ဒေသ အစိတ်အပိုင်းအများစု၌ တန်ဖိုးစံ အခြေခံ ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှုအပေါ် အခြေခံစံတန်ဖိုးများ မြင့်မြင့်မားမား တက်လာကတည်းကဟု ဆိုရမည်။ ဤဖြစ်ရပ်က အာဏာပိုင်စနစ်တွေ မမျှော်လင့်ဘဲ တစစီပြိုကျသွားမည်ဟု ဆိုလိုသလား။ မဟုတ်ပါ၊ လိုအပ်ချက်အရကို မဟုတ်ပါ။
အာဏာပိုင်စနစ်များ၏ တရားဝင်ဖြစ်တည်နေမှုကို ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု တန်ဖိုးများက ပြိုကျသွားစေအောင် ဦးတည်လိုက်ချိန်နှင့် စစ်တပ်၊ ရဲတို့ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သော ဖော်ပြပါ အီလစ်တို့က ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုများအား နှိပ်ကွပ်ပေတော့မည်။ နှိပ်ကွပ်နိုင်ခြေလည်း ရှိကောင်းရှိမည်၊ ရှိသည်။ ကံကောင်းသည်က လူတွေအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေး ရုန်းကြွကြသည်ဆိုရာ၌ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ ဆင်ခြေများ သက်သက်အတွက် မဟုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လုပ်ခဲ့ကြသည် ဆိုလျှင်တောင် ဒီမိုကရက်တစ် လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်များကို အလွယ်တကူ ဝယ်လိုက်နိုင်ဖွယ် ရှိနေ၍ ဖြစ်သည်။ ရုန်းကြွမှု အတွင်း ဂုဏ်ယူသိမှတ်ပြုဖွယ် အကောင်းဆုံး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမှာ လွတ်လပ်မှုကို အနှစ်သာရရှိရှိ တန်ဖိုးထားသူများသာ ဖြစ်ကြသည်။
ခေတ်မီ တိုးတက်ရေးသည် သိမှတ်ပြုလောက်စရာ ရွေ့လျားလှုပ်ရှား ပါဝင်ခြင်းရော၊ ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု တန်ဖိုးများအပေါ် စူးစိုက်မှုကြီးထွားလာခြင်းကိုပါ တပါတည်း တိမ်းညွတ် ယူဆောင်လာ၏။ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများကို လိုလားတောင်းဆိုသူ ပိုများလာအောင် တဖန် လှုံ့ဆော်ပေး၏။
အီလစ်တို့က ဖိနှိပ်ရေး တွက်ချက်နေသကဲ့သို့ လိုလားသူများက အင်စတီကျူးရှင်းများကို ပိုထိရောက် သက်ဝင်စေပြန်၏။ နောက်ဆုံး၌ အတွင်းကျကျ မျိုးဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝင်ရောက် နေရာယူလာနိုင်ခြင်းတို့ဖြင့် အီလစ်တို့ကိုယ်တိုင် ၎င်းတို့ ဘာသာ အာဏာရှင်ဆန်မှုနှင့် ဖိနှိပ်မှုကို လျှော့ချလျော့ပါးစေလာကြရသည်။ ပိုငယ်ရွယ်သော ဦးတည်ချက် ကောင်းမွန်ကြီးမားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း (များ) ထဲမှ ပေါ်ထွက်လာသူတို့ ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်မှုတန်ဖိုးများကို အလေး ပိုထားလာကြ၍ ဖြစ်သည်။ လူမှုအပြောင်းအလဲဟူသည် တိုင်းတာပြ၍ မရသော်လည်း ခေတ်မီတိုးတက်ရေးက ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းတို့ ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မည်ဟူသော ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးစေပါ၏။
ဒီမိုကရေစီနှင့် ဓန ပြန်လည်ခွဲဝေ ဖြန့်ကျက်စေခြင်း
ဒီမိုကရေစီသည် ကြွယ်ဝလှသော အီလစ်များနှင့် ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသော လူအုပ်စုကြီးများအကြား ရုန်းကန်ထိုးကြွခြင်း ရလဒ်ဟု အနက်ပြန်ဆို ပြထားသော ကားလ်စ်ဘွိုက်ခ်စ်၊ ဒါရွန်အက်စီမိုဂလူးနှင့် ပူးတွဲရေးသားသူများ၏ “ဒီမိုကရေစီနှင့် ပြန်လည်ခွဲဝေ ဖြန့်ကျက်ပျံ့နှံ့စေခြင်း” စာအုပ်က အလွန်သြဇာကြီးလှပါသည်။
ထိုအုပ်စုနှစ်စုလုံး စီးပွားရေး ဖြန့်ကျက်ခွဲဝေမှုဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားတို့အတွက် ထိပ်တိုက်တွေ့ခံနေကြရကြောင်း၊ ပဋိပက္ခ အသွင် ဆောင်နေကြောင်း ယင်းစာအုပ်၌ပင် ဖွင့်ဆိုဖော်ပြထားသည်။ လူအုပ်စုကြီးတွေက စီးပွားရေး ပြန်လည်ခွဲဝေ ဖြန့်ကျက်ရန် အားလုံးအကုန်အစင် မဲပေး၊ ဆန္ဒပြုလိုကြ၏။ အီလစ်တို့က ထွက်လာမည့် ရလဒ်ကို ကြောက်ပြီး ယင်းကိစ္စကို အသေးစိတ်ပါမချန် အတိုက်အခံပြု၏။ ဘာတွေ အကျိုးဆက်ဖြစ်လာသည်လဲ။
အီလစ်များက ပြန်လည်ခွဲဝေ ဖြန့်ကျက်စေမှုကို ၎င်းတို့ ယုံကြည်နိုင်လောက်သည် အထိပဲ ပေးလိုခြင်း၊ ကျယ်ပြန့် ကြီးထွားသွားဖို့ ဆိုလျှင် ဆန္ဒမရှိ၊ ကာကွယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာသည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်မှုများကို ဒီမိုကရေစီ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း အဖွင့်တွေအတွက် အသုံးချကြသည်။ ၎င်းတို့ သုံးသပ်သည်များက ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီ ဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းမည်လဲ ဆိုခြင်းမဟုတ်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဘယ်လို ဘယ်လောက်လုပ်မလဲ ဖြစ်မလဲဆိုခြင်းသာ ဖြစ်နေ၏။
ရှေ့ပိုင်း၌ တင်ပြ ချေပခဲ့ပြီးသလို ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီသည် တူညီသောအရာ မဟုတ်ပါ။ တူညီရာ မဟုတ်ဆိုသည်ထက် ထပ်တူမကျ၊ တခုတည်း မဟုတ်ဆိုခြင်း သဘောလည်းရှိကြောင်း ထပ်ဆင့် သိမြင်ကြရန် ဖြစ် ပါသည်။
ဤပုံစံမိုဒယ်တွင် ဘွိုက်ခ်စ်၏ အယူက ဘယ်လိုရှိသည်လဲ။ ဝင်ငွေခွဲဝေခြင်း ပိုမျှတလာလျှင် သူတို့အိတ်ကပ်ထဲက ဓနတွေ ပါသွားမှာ အီလစ်တို့၏ အကြောက်တရားဟု ဆိုလိုချင်သည့်ပုံဖြစ်၏။ ပုံစံဟောင်း ပြန်လည်ခွဲဝေမှုဖြင့် သေချာညှိနှိုင်း အပေးအယူလုပ် ရပ်တည်ပြလာနိုင်သောလူတွေ ပမာဏတခု ရောက်လာလျှင် ဤကိစ္စ ဖြစ်မြောက်လာဖို့ ရှိသည်။
ထိုနည်းတူ အရင်းရွေ့လျားနိုင်စွမ်း မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ အီလစ်တို့၏ အကြောက်တရား လျော့ပါးလာမှုကလည်း တခါသုံးပစ္စည်းလို ခဏခဏ ဖြစ်နေတတ်သည်မှာ ၎င်းတို့ အရင်းအနှီးကို လူတွေ လက်လှမ်း မမီသည့်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ ထားလိုက်နိုင်ခဲ့စဉ် ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါ၏။ ဤမိုဒယ်အရ ထုထည်လိုက် လူစုလူထုများသည် ဒီမိုကရေစီကို အမြဲ မျက်နှာသာပေးကြောင်း သိမြင်လာရ၏။
ထို့အပြင် ဒီမိုကရေစီဦးတည်ချက် သေချာကျနဆောင်တာ တခုလည်း ဖြစ်လာနေပါ၏။ လူထုလိုအင်ဆန္ဒများက ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဖြစ်လာပြီး ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းအပေါ် သက်ရောက်ရိုက်ခတ်မှု မရှိစေသော ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်လာသည်မျိုးပင်။ ဤမိုဒယ်ကပင် ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းစဉ်များတရပ်ကို အလားတူ ဥပေက္ခာ ပြုထား၏။ လူမှု စုပေါင်းရွေ့လျားမှုတို့က အထွေထွေ လူဦးရေတရပ်လုံး၏ နိုင်ငံရေးတွင် ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင်လာနိုင်မှု စွမ်းရည်ကို ဖယ်ချန်ထားခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စကလည်းပဲ တကယ်တမ်း ရိုးရှင်းထင်ရှားလှသောအချက် ဖြစ်နေသည်။ ဒီမိုကရေစီရေး လူထုလိုအင်များ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲဆိုသည့်အပေါ် နှိပ်ကွပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အီလစ်တွေလက်ထဲ ရောက်နေသည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဆက်နွယ်ချက်များကို ချဲ့ထွင်ရာ၌လည်း ထိုကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေသည်။ ခေတ်မီတိုးတက်ရေးက ဒီမိုကရေစီကဲ့သို့ တူသယောင် ကိစ္စများကို သြဇာလွှမ်းမိုး၏။ ဝင်ငွေမျှတမှု မြင့်တက်ခြင်းနှင့် အရင်းရွေ့လျားနိုင်စွမ်းကဲ့သို့ ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပြီး လူတိုင်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ဆိုသည်မျိုးကို အီလစ်တို့က ပိုလက်ခံနိုင်စွမ်း ရှိနေပါသည်။
ယခုဖော်ပြပါ ယူဆတင်ပြချက်တို့ကို ခပ်မြင့်မြင့်ပဲ မေးခွန်းထုတ်ရတော့မည်။ လက်တွေ့ ဖြတ်သန်းမှုအရ လူထု(များ)သည် ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများအပေါ် အသေအချာ ထိန်းကျောင်းနိုင်ပြီး လိုအပ်လျှင် ဖြုတ်ချနိုင်သည်အထိ စွမ်းရည် ရှိကြောင်း ရေချိန်ဒီဂရီများစွာ၊ သင်ခန်းစာများစွာဖြင့် ကျနော်တို့ တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်၏။ ဘယ်ကတည်းက ဒီလိုစတွေ့ခဲ့ ကြရသလဲ။ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု ရင်းမြစ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်မှု တန်ဖိုးများအပေါ် လူထု ဂရုဓမ္မ အလေးပြုလာခြင်း နှစ်ရပ်လုံးဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တနေရာမှ တနေရာဆီ နောက်ထပ် ရွေ့သွားစေကြောင်း ပုံစံကားချပ်မျိုးစုံ ကောင်းစွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့စဉ်ကတည်းက တွေ့ခဲ့ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများ ချဲ့ထွင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်က အီလစ်တို့ရွေးချယ်မှု တရပ်တည်း သီးသန့်ဆန် ကျန်ရှိနေတတ်သည်။ လူတဦးချင်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု ရင်းမြစ်များ ချို့တဲ့နေချိန်ကာလကို ဆိုလိုပါ၏။ သို့ငြား စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုက ပြဇာတ် ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်စေ၏။ ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် အားကောင်းရင်းမြစ်များ ပိုကြီးမားလာခြင်းက လူတွေကို လှုပ်ရှားမှုများ ရွေး ချယ်ရာ၌ ပိုပါဝါကြီးလာစေနိုင်သလို အီလစ်တို့အပေါ် ထိထိရောက်ရောက် ဖိအားပေးလာနိုင်စေပါ၏။
(ခရစ္စတီယန် ၀ယ်လ်ဇယ် (Christian Welzel) သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘရီမင်းမြို့၊ ဂျက်ကော့ဘ်စ်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးစံများ စစ်တမ်းကောက်ယူရေး အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ရော်နယ်အင်း ဂဲဟာ့တ် (Ronald Inglehart) သည် မီချီဂန်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးစံများ စစ်တမ်း ကောက်ယူရေး ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ထုတ် “ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု အပြောင်းအလဲနှင့် ဒီမိုကရေစီ” စာအုပ်ကို ခရစ္စတီယန်ဝယ်လ် ဇယ်နှင့် ရော်နယ် အင်ဂဲဟာ့တ်တို့ ပူးတွဲရေးသားခဲ့ပြီး တခြားထင်ရှားသော စာအုပ်များကိုလည်း ပြုစုခဲ့သည်။ ယခု ဆောင်းပါးကို Journal of Democracy နှင့် Johns Hopkins University Press တို့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီး Educational Initiatives (ပညာရှေ့ဆောင်) က ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Educational Initiatives (www. eduinitiatives.org) အဖွဲ့သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းများ၊ အရည်အသွေးမြှင့် သင်တန်းများကို ပို့ ချပေးနေသော ရန်ကုန်အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်၏။)
Posted by Alex Aung at 5:24 AM No comments:
သင်္ကြန်ပွဲတော် ဟူသည် မြန်မာပြည်အပါအ၀င် အရှေ့တောင် အာရှဒေသ၏ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသည့်အနေအားဖြင့် ကျင်းပသည့် ပွဲတော်တခု ဖြစ်သည်။"ကူးပြောင်းခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း"ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော ပါဠိဘာသာ"သင်္ကန္တ"၊ သက္က တဘာသာ"သင်္ကြန္တ"တို့ကို တိုက်ရိုက် မြန်မာမှု့ပြု၍ "သင်္ကြန်"ဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါ၏ ။
သက္ကတ ဘာသာစကားကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ သင်္ကန္တ စကားလုံးဟာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသနေ ပြည်သူတွေရဲ့ ၀န်းကျင် အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့ သင်္ကြန်၊ ထိုင်းတို့ရဲ့ ဆွန်ကရန် (Song Kran)၊ ကမ္ဘောဒီးယား ချိုချနန်သမေး (Chol Chnam Thmey)၊ လာအိုတို့ရဲ့ ဘီးမိုင် (Bpee Mai) နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ဒိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ ရေသဘင်ပွဲဆိုတဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တို့ဟာ တစ်ခုတည်းသော ရင်းမြစ်က ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ ပွဲတော်များ ဖြစ်ပါတော့တယ်
အကျဉ်းအားဖြင့်တော့ အချင်း ယူဇနာ ၅၀၊ လုံးဝန်း ယူဇနာ ၁၅၀ ရှိပြီး အတွင်းဘက်ကား ရွှေ၊ အပြင်ဘက်ကား ဖလ်သားအတိနဲ့ ပြီးသော ‘ဘာဏုရာဇာ’မည်တဲ့ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းဟာ နဝင်းတစ်လုံးမှ နေပြီး နဝင်းတစ်လုံးဆီ၊ နက္ခတ်တစ်လုံးမှ နက္ခတ်တစ်လုံးဆီ၊ တစ်ရာသီမှ တစ်ရာသီသို့ အစဉ်လိုက် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို အစွဲပြုလို့ သင်္ကြန်ခေါ်ဆိုကြောင်း လောကီကျမ်းများအရ သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီိတော့ သင်္ကြန်ဆိုတာ ပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းရွှေ့ခြင်း လို့ အကျဉ်းအားဖြင့် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ် ။
သင်္ကြန် အကျယ် သိမှတ်ဖွယ်
သင်္ကြန်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အကျဉ်းမျှဖြင့် သဘောပေါက် နားလယ်ဖို့ မလွယ်ကူဘူး ထင်မိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အကျယ်ချဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ ဤသို့ အကျယ်အားဖြင့် လေ့လာ သိရှိ မှတ်သားခဲ့ရပါတယ် ။
ဤကမ္ဘာမြေကြီးသည် နေကို ဗဟိုပြု၍ မိဿရာသီမှ စ၍ ပြိဿ၊ မေထုန်၊ ကရကဋ္ဋ်၊ သိဟ်၊ ကန်၊ ဗြိစ္ဆာ၊ ဓနု၊ မကာရ၊မိန်ဟူသော ၁၂ ရာသီခွင်တို့သို့ အစဉ်လိုက်ကူးပြောင်းလှည့် ပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်၊ ၆ နာရီ၊ ၁၂ မိနစ်၊ ၃၇ စက္ကန့်ပြည့်သောအခါ မိဿရာသီ အစဖြစ်တဲ့
အဿဝနီ နက္ခတ် ပထမပတ်သို့ စတင် ၀င်ရောက် ပါတယ်.. ယင်းသို့ ရာသီခွင်တပတ်လည် ၀င်ရောက်စအချိန်ကိုရာသီတခုမှ ရာသီတခုသို့ ကူးပြောင်း သောကြောင့်"သင်္ကြန်" ကျသည်ဟုခေါ်ဆိုပါတယ် ။
စူဠ မဟာ သင်္ကြန်အခါ
တနှစ်မှာ န၀င်းအရေအတွက် ၁၀၈ န၀င်းဖြစ်၍ သင်္ကြန် ၁၀၈ ကြိမ်၊ နက္ခတ် ၂၇ လုံး ဖြစ်၍ သင်္ကြန် ၂၇ ကြိမ်၊ ရာသီ ၁၂ ခုဖြစ်၍ သင်္ကြန် ၁၂ ကြိမ် ကျသည်၊ ၁၂ကြိမ် ကူးပြောင်း သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ယင်းကူးပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် သင်္ကြန်ကျခြင်း တို့မှာ"သာမည ကူးပြောင်းခြင်း" ဖြစ်၍ "အငယ်စား- စူဠသင်္ကြန်" တို့သာ ဖြစ်နေသည့် အတွက် လူတို့ က အလေးအနက် မထားမကြပါဘူး ။
ဂြိုဟ်အပေါင်းတို့၏မိခင်ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ကိုသာ အလေးဂရုပြု ကာဖြင့် နှစ်၊ လ၊ ရက်တို့ကို မှတ်သားကြ သောကြောင့် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ပြောင်းရွှေ့ ကူးပြောင်း ခြင်းကို သာလျှင် "သင်္ကြန်"ဟုလည်းကောင်း၊ "သင်္ကြန်ကြီး- မဟာ သင်္ကြန်"ဟုလည်းကောင်း အလေး အမြတ်ပြု မှတ်သားလျက် သင်္ကြန်ပွဲတော် ဆင်နွှဲ ကျင်းပ ကြပါတယ် ။
ထို့ကြောင့် ဧပြီလအစပိုင်း သို့မဟုတ်အဆုံးပိုင်းရက်များ တွင်ဖြစ်စေ၊ မေလ၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ များတွင်ဖြစ်စေ ကျင်းပလေ့ ရှိကြသော အနောက်နိုင်ငံ များနေ မြန်မာတို့၏ သင်္ကြန်ပွဲများ သည် "မဟာသင်္ကြန်ပွဲ " မဟုတ်ဘဲ "စူဠသင်္ကြန်ပွဲ" များသာ ဖြစ်သည်ဟု သတိပြုနားလည်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်
သင်္ကြန် ကြို..အကျ ...အယူ အဆ
တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ သိကြားမင်းသည် သင်္ကြန်ကျချိန်မှာ လူ့ပြည်သို့ ခေတ္တခဏ ဆင်းလာလေ့ရှိတယ်။ သိကြားမင်း လူ့ ပြည်ဆင်းချိန် သည် "သင်္ကြန်ကျချိန်"ဖြစ်၍...မဆင်းမီ တရက် အလို သိကြားမင်းကို ကြိုဆိုသော နေ့ကိုတော့ "သင်္ကြန်အကြိုနေ့" ဟု ခေါ်ဆိုကြတယ် ဟု ယူဆ ဖေါ်ပြလေ့ ရှိပါတယ် ။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သင်္ကြန်ကျမည့်ရက်ကို အလွယ်တကူ သိနိုင်သော နည်းမှာ လွန်ခဲ့ သောနှစ် သင်္ကြန်အတက်ရက်မှ စ၍ ရေတွက်လျှင် ၃၆၄ ရက်မြောက်နေ့သည် ယခုရောက်ဆဲ နှစ်၏ သင်္ကြန်အကျ နေ့ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျအားဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ် သင်္ကြန်ကျသောနေ့ ရက်အချိန်မှ ၃၆၅ ရက်၊ ၆ နာရီ၊ ၁၂ မိနစ် ၃၇ စက္ကန့်ပြည့်သောအချိန်နေ့ရက်သည် ယခု ရောက်ဆဲနှစ်၏ သင်္ကြန်အကျနေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။
တခါက သိကြားမင်းနှင့် ဗြဟ္မာမင်းတို့ ၂ ယောက် စကားလက်ဆုံ ပြောကြရာ ကဿပ ဘုရားရှင် လက်ထက် မတိုင်ခင်က လူ့ပြည်၌ တစ်ပါတ်လျှင် ၈ ရက်ရှိ ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၇ ရက်သို့ ပြောင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိကြားမင်းက ပြောလေရာ ဗြဟ္မာမင်းက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုကာ ငြင်းခုံ ကြပါသတဲ့ ။
ထို့နောက် ရှုံးတဲ့သူ က ခေါင်းဖြတ်ကြေး ဟု သတ်မှတ်ကာ လူပြည်သို့ ဆင်းပြီ ထိုအချိန်က သီလ၊ သမာဓိနှင့် ပြည့်စုံသည့် ရသေ့ထံတွင် အဆုံးအဖြတ် ခံယူပါသတဲ့ ။ အဘိဥာဏ်ရ ရသေ့က ယခုအခါတွင် လူပြည်တွင် တနင်္ဂနွေအစ စနေအဆုံး ၇ ရက်သာ ရှိတော့သည်ဟု အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့လေသတဲ့။
ဗြဟ္မာမင်းလည်း သူ့ကတိအတိုင်း သူ၏ဦးခေါင်းကို အဓိဌာန်ဖြင့် ဖြတ်ပြီး သိကြားမင်းလက်သို့ ပေးအပ်လိုက်ပါတယ် ။
ထို ဗြဟ္မာ ဦးခေါင်းပြတ်ကြီး သိကြားမင်း လက်ထက်ထဲသို့ ရောက်သည့်အခါမှ သိကြားမင်းမှာ စဉ်းစားမိသည်မှာ......။ မြေပေါ်ချထားလျှင် ၇ နှစ် ကမ္ဘာမီးလောင် ပြီး မိုးခေါင်လိမ့်မည် ရေ တွင် ထားပါက လည်း သမုဒ္ဒရာ ၇ စင်းမှ ရေများ ခန်းခြောက်သွားလိမ့်မည် လို့ပါပဲ ..ဒီတော့ မြေမှာလဲ မထား..ရေ သို့လို့ မပို့တော့ပဲ့နတ်သမီး ၇ ယောက်မှ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ယောက်ကြ ဗြဟ္မာဦးခေါင်းကို ကိုငထာ်းထားရန် တာဝန်အပ်နှံပေးထားလိုက်ပါတော့သတဲ့ ။
ထို နတ်သမီးတွေရဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ဦးခေါင်းကိုင်ရန် အလွှဲအပြောင်း ကိုလည်း သင်္ကန္တ ဟို ခေါ်ပြီး ထိုမှ ရွေ့လျှော ဆင်းသက်ရာမှ သင်္ကြန်ဆိုတာ ဖြစ်လာပါသတဲ့
မြန်မာပြည်တွင် တစ်နှစ်တစ်ခါ ထုတ်ဝေတဲ့ သင်္ကြန်စာများမှာလည်း ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကို လွှဲပြောင်းပေးနေပုံကို ဖော်ပြလေ့ရှိတာ သတိပြုမိပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော သင်္ကြန်ဆိုတာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း အဓိပ္ပာယ်လို့သာ လွယ်လွယ် မှတ်လိုက်ကြပါစို့နော်။
မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်များ အစ ...ပုဂံခေတ်က
ရှေးမှတ်တမ်းများအရ ရေကစားပွဲတော်ကို ပထမဆုံး စတင်ခဲ့သည့် ဘုရင်မှာ ပုဂံခေတ် နရသီဟပတေ့မင်း လက်ထက်တွင် ဟု သိရပါတယ်။ ထိုမင်းသည် ရေကစားပွဲတော်တွင် သူ၏မိဖုရား စောလုံ ကို အရှက်ကွဲအောင် စနောက်မိခဲ့သဖြင့် စောလုံမှ ထမင်းပွဲတွင် အဆိပ်ထည့်ကာ လုပ်ကြံ သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ် ။
အချိန်မှီ သိရှိသဖြင့် ဘုရင့်အသက် မသေခဲ့သော်လည်း မိဖုရားစောလုံကိုတော့ မီးကျီးခဲ ရဲရဲတွင် မီးကင် သတ်စေခဲ့ပါတယ် ။သင်္ကြန် အစ၏ ကြေကွဲစရာ မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဟုသာ ဆိုပါရစေ
ဟိုးတစ်ချိန်က ရှေးပညာရှိကြီးတွေ ဟာ အတာနှစ်ဦးမှာ ရှောင်ကြဉ်ရ မယ့် ဓလေ့တချို့မှတ်သားဖွယ် ဖော် ထုတ်သွားခဲ့တာကို သတိရဆင်ခြင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အတာသင်္ကြန်အခါတွင်
ရုဒံ- ငိုကြွေးခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ မေထုနဉ္စ-မေထုံမှီဝဲခြင်းကိုသော် လည်းကောင်း၊ မံသံ -ဟင်းမျိုးစိမ်းကို ဝယ်စားခြင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ သူရ-သေရည်သေရက်သောက်ခြင်း ကို သော်လည်းကောင်း၊ကောဓောစ -အမျက်ထွက်ခြင်းကိုသော်လည်း ကောင်း၊ ရုဓံ- သွေးထုတ်ခြင်းကို သော်လည်းကောင်း၊ တေလိကံ- ဆေးဆီလိမ်းခြင်းကိုသော်လည်း ကောင်း၊ နကေရ-မပြုရာ၊ မရောင်း အပ်။ဣမာနိဒသ ကမ္မာနိ- ဤသို့ ဆယ်ပါးသောအမှုတို့ကို၊ သက္ကောပိ -သိကြားမင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပရိဇ္ဇယေ-ဖဲကြဉ်ရာ၏။ မြန်မာသက်သက်အနေဖြင့် ဖေါ်ပြရမူ
(၁၀) ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း၊ ဆိုင်ထွက်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်
ထို(၁၀)ပါးသေားအမှု့တို့ကို မကြဉ်ရှောင်သောသူတို့ အား နတ်သိကြား မင်းတို့သည် ခွေးသရေပေါ်တွင် မှတ်တမ်းသွင်းကာ မကောင်းသောကြည့်ခြင်းဖြင့် လူဆိုးစာရင်းသွင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ခံရတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်
ဒါကြောင့် ပျို့ကဗျာတွေမှာ ”မင်္ဂလာစကား၊လင်္ကာကြားအံ့၊ ကြော်ကြားစုံစေ၊ သင်္ကြန်နေ့၌ မတွေ့ဝေးစွာ၊ ရှောင်ကုန်ရာသား၊ မသာနှလုံး၊ ညှိုးချုံးစိုးရိမ်၊မငြိမ်ပူဆွေး၊ ငိုကြွေးကုန်ထ၊ ကာမအရှာ၊ မေထု နာနှင့် ပါဏာသတ်ပုတ်၊ သောက် ထုတ်ရက်မ၊ မျက်ထွက်မာန၊ ပဋိယ နှင့်ဒေါသမလွတ်၊ ဆီပွတ်လိမ်းဆင်၊ သစ်ပင်ခုတ်ဖြတ်၊ သတ်ခတ်တုန် ရှောင်၊ အရောင်းအဝယ်၊ ဤတစ် ဆယ်ကို၊ လူ့ဝယ် နတ်ခွင်၊လူလိုစင် ထား၊မြင်းမိုရ်ဖျားဝယ်၊ သိကြားသော် မှ၊ မပြုရရာ၊ ကျမ်းလာသောအား၊ လင်္ကာကြားသည်။ ဤကားသင်္ကြန် အလိုတည်း” အဲသလိုစပ်ဆို ထားခဲ့ ပါတယ်။
သင်္ကြန်အတွင်းမှာ မကောင်းသော အပြု အမူ အပြောအဆို အကြံစည်တွေကို ရှေင်ကြဉ်ရပါတယ် ။
"မဟာသင်္ကြန်" နှင့် တွဲဖက်၍ "အတာ" ဟူသော ဝေါဟာရ၊ "အတာစား "ဟူသော ဝေါဟာရ တို့ကို ပြောဆို သုံးစွဲ နေတာကို တွေ့ရပါမယ် ။
"အတာ"ဟူသည် လောကီ အလို ဒဏ်သင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် "အန္တ-အဆုံး End"ဟူသော ပါဠိပုဒ်မှ "အတာ" ဖြစ်လာသည်ဟုလည်း ကြံဆ ကြပါတယ် ။
ယင်းအလို အားဖြင့် "အတာ"ဟူသည် " နောက်ဆုံး ကာလ၊ အကျပိုင်း ကာလ" ကို ဆိုလိုပါတယ်
"အတာရက်"မှာ သင်္ကြန် အတက်ရက် ဖြစ်၏။နှစ်တနှစ်၏နောက်ဆုံးရက်ပင် ဖြစ်တယ် ။ သင်္ကြန်အတက်ရက်နှင့် မွေးနေ့ တိုက်ဆိုင်သူများသည် "အတာသင့်"သူများ ဖြစ် လာပါတယ်။
ဒါကိုပင် အတာစားသည် ဟု ပြောဆို သုံးစွဲနေကြပါသေးတယ် ။
အတာစားသည့် နေ့နံသားသမီးတို့သည် အတာတက် မည့် အချိန်အတိအကျတွင် "အတာစား" ရပါတယ်။ "အတာစား" ဟူသည် အတာတက်ချိန်မှာ ကောင်းမွန်သန့်ရှင်းစွာဝတ်စားဆင်ယင်လျှက် အရှေ့တောင်အရပ်သို့ မျက်နှာမူကာ ပူဇော်ရိုသေ ထိုက်သူများကို လှူဖွယ် ပစ္စည်းတို့ဖြင် ဆက်ကပ် ခြင်း စသည်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားတာတွေ လေ့လာ ဖတ်ရှု့ရပါတယ်
အတာစားခြင်း၏အကျိုးကား----- အတာပုည၊ ကုသလကို၊ ပြုကြ ကုန်သော၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် "အတာကမ္မံ ကရောန္တဿ မဟာဘောဂံ မဟာသုခံ မဟပ္ဖလံ စတုဒ္ဒိသံ ဝေရီဇေယျသုမင်္ဂလံ" ဟု ရှေးပညာရှိတို့ ရေးဖွဲ့ ခဲ့သည်နှင့် အညီထိုကဲ့သို့ ရတနာ သုံးပါး စသည်တို့အား လှူဒါန်း ပူဇော်ကြသော သူတို့ သည် ကောင်းကျိုး ချမ်းသာ မင်္ဂလာ တရား ပြန့်ပွား တိုးတက် ပြည့်စုံ ကုန် ရာသည်။" ဟု မှတ်သားရဖူးပါတယ်..
အတာအိုး အတာပန်း .....
အတာအိုးကို သင်္ကြန်ကို စောင့်ကြို သည့်အနေဖြင့် သင်္ကြန် မကျခင် ကြိုတင် ပြင်ဆင် ရသည်။
(၇) ရက်သားသမီးတို့ အတွက် ရည်ရွယ်၍ ပန်း ၇ မျိုးဖြစ်စေ၊ အညွန့် ၇ မျိုးဖြစ် စေ ရေပြည့်အိုးမှာ ထည့်ကြလေ့ ရှိပါတယ် ။
စာရေးသူတို့ အညာနယ်မှာတော့ သင်္ကြန်ကျသည်နှင့် တပြိုင်နက် အတာအိုးမှ ရေကို သွန်၍ သင်္ကြန်ပန်း၊ သင်္ကြန် အညွန့်တို့ကို အိမ်ဦး ၀င်းထရံ စသည်တို့၌ ထိုးစိုက်ကာ နှစ်သစ်မှာ ဘေးရန်ကင်းကွာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာဖို့ ဆုတောင်းဆုယူပြုလေ့ရှိပါတယ် .။
သင်္ကြန် ရောက်ပြီဆိုပါလျှင် အစဉ်အလာအားဖြင့် ဦးခေါင်းဆေး မင်္ဂလာကိုလည်း ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြပါတယ် ။ သင်္ကြန် ဟူသည် ဗသျှူသင်္ကြန်၊ အာရာမသင်္ကြန်၊ သမန္တသင်္ကြန် ဟု ၃ မျိုးရှိပါတယ် ။
ဗသျှူ သင်္ကြန်ဖြစ်က သင်္ကြန် မ၀င်မီ ဦးခေါင်းဆေး ကြရသည်။
အာရာမသင်္ကြန်ဖြစ်က သင်္ကြန်ဝင်ဆဲမှာ ဦးခေါင်း ဆေးကြ ရသည်။
သမန္တသင်္ကြန်ဖြစ်က သင်္ကြန်ကျပြီး ၂၄ မိနစ်မှာ ဦးခေါင်းဆေးကြရ သည်။
(သမန္တသင်္ကြန်ဖြစ်က တနာရီလွန်မှ ဦးခေါင်း ဆေးကြ ရသည်ဟုလည်း ပညာရှင်တို့ ဆိုကြပါ၏။)
သင်္ကြန် အမျိုး အစား ၁၂ မျိုးဟုလည်း သုတေသန သရုပ်ပြ အဘိဓာန်မှာ တွေ့ရ၏။ ရှေးမြန်မာတို့သည် မိမိတို့၏ ကိုယ်အင်္ဂါတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံး ဖြစ်သော ဦးခေါင်းတွင် နှစ်ဟောင်းက ကပ်ငြိစွဲ ကျန်နေသော အညစ်အကြေး များ နှစ်သစ်သို့ ဆက်လက် မပါရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဦးခေါင်းဆေး မင်္ဂလာ ပြုခဲ့ကြပြီး အတိတ်ကောင်း ယူကာ ကိုယ်စိတ် သန့်ရှင်းမှုကို အကျိုးပြုရာ ရောက်သည်ဟု ယူဆခဲ့ကြပါတယ် ။
ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်သောကြောင့် အကျိုးရပုံကို သင်္ကြန်စာများတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြ ထားပါတာကို ဖတ်ရှု့ မှတ်သားရဘူးပါတယ်
"ဦးခေါင်းဆေးရသောအကျိုးကား---သင်္ကန္တေ၊ သင်္ကြန်ဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်း သည်။ ပုဏ္ဏမေ၊ အံသာ(၃၆၀) ရသဖြင့် တဘဂဂဏပြည့်၍ မိန်ရာသီ အ၀သာန် န၀င်းမှ မိဿ ရာသီ အာဒိန၀င်းသို့ ပြောင်းခဲ့သည် ရှိသော်။ က္ကူဓ၊ ဤ လူ့ပြည်၌။ မာဏ၀ါ၊ သတ္တ၀ါဟုခေါ်ဝေါ် အပ်ကုန်သော။ မနုဇာ၊ လူအပေါင်း တို့သည်။ သိရာ၊ ဦးခေါင်းဆေးကုန်ရာ၏။
တေသံ၊ ထိုဦး ခေါင်းဆေး ကုန်သော သူတို့အား။ သတ္တဘာဂီ၊ ခုနှစ်နှစ်ကဖြစ်ကုန်သော။ ရောဂီ၊ အနာမျိုးတို့ သည်။ ၀ိနာသေယျူံ၊ ကင်းပျောက်ကုန်ရာ၏။ သုခဘာဂီ-ချမ်းသာခြင်း၏ အဘို့ဖြစ်ကုန်သော။ သတသဟဿာနိ၊ တသိန်းသော အကျိုးတို့သည်။ ဘဝေယျူံ၊ ဖြစ်ကုန်ရာ၏။"
ဤအထက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း နှစ်သစ်မှာ ကောင်းကျိုး ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံရအောင် သင်္ကြန်ကာလများမှာ ဦးခေါင်းဆေး မင်္ဂလာများ ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ရပါတော့တယ်
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် မူ သင်္ကြန်ဆိုတာ ပြောင်း လဲ ခြင်းလို့ နားလည်ခဲ့ရပါပီ .. ဒီ ပြောင်းလဲ ခြင်းဟာ ဘယ်တော့မှများ အဆုံးသတ်ပါလိမ့်ဟုလဲ တွေးကြည့်မိပါတယ်...ပုထုဇဉ်ဘ၀ နဲ့ သံသရာတစ်ခွင် ကျင်လည်ခဲ့ရအုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် နိမ့်တုံတခါ မြင်ဘုံတစ်လှည့်ဖြင့် ပြောင်းလှည့်နေအုံးမှာဖြစ်တော့ တော်ရုံနဲ့ အဆုံးမသတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်....
လောကကြီး ထဲမှာ လူဖြစ်လာပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ လှည့်လည်နေကြသူတွေဟာ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာဆီ ပြောင်းရွှေ့ပြီဆိုပါရင် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သည် ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်း သယ်ဆောင်သွားတတ်ကြပါတယ် ၊ အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာလဲ ကောင်းနိုးနိုးရာရာ တန်ဖိုးရှိ သည့် မိမိနဲ့ အသုံးတည့်သော အရာများကိုသိမ်းဆည်း လေ့ရှိကြပါတယ် ။ တန်ဖိုးမဲ့ တဲ့ အရာတွေကို စွန့် ကာ ထားခဲ့ပြီး တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းကို သာ မိမိနဲ့ တပါးတည်း သယ်ဆောင်သွားတတ်ကြတာကို သတိပြုမိပါတယ်
ဒီပုံသဖွယ်ပါပဲ...မိမိတို့ဟာ အမြဲမရှိလေသော သင်္ခါရ လောကနယ်မှာ လူဖြစ်လာကြသူတွေမို့ တစ်နေရာတည်းမှာ ထာဝရ ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ ... နိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာဆီ ၊ ဆိုးရာကနေ ကောင်းရာဆီ ..ကျရှုံးမှု့ မှသည် အောင်မြင်မှု့ဆီ ... ဒေသ တစ်ခုကနေ ဒေသ တစ်ခုဆီ စသည် စသည် ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ရမှာတော့ သေချာပါတယ်.. နောက်ဆုံး တော့ ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာကို စွန့်ခွာလို့ တမလွန်ဆိုတဲ့ နောင်ဘ၀ ဆီ အထိ ပြောင်းရွှေ့ရအုံးမယ်..
သတ္တ၀ါတွေမှာ ကံသာလျှင်ကိုယ်ပိုင် ဥစ္စာ ရှိပေရာ ဒီလို ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာ တန်ဘိုးနဲ ပြီး အပါယ်ကို ဆွဲချနိုင်တဲ့ အကုသိုလ်ကံ ဥစ္စာတွေကိုပဲ သိမ်းဆည်း သယ်ဆောင်သွားကြမည့်အစား ...တန်ဖိုးကြီးပြီး မြင့်မြတ်သော အထက်တန်းကျ မျက်နှာပန်းလှတဲ့ ဘုံဘ၀တွေ ကို ရောက်စေနိုင်သည့် ကုသိုလ်ကံ တည်းဟူသော ဥစ္စာတွေကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါလား
ဒါကြောင့် တစ်နှစ်မှသည် တစ်နှစ်ဆီသို့ ရွှေ့ပြောင်းသော ဒီသင်္ကြန် အခါ အကြောင်း လေ့လာဆည်းပူးရင်း နှစ်သစ်ကြိမ်ရာ မင်္ဂလာရှိသော သင်္ကြန်အခါကာလမှာ ကောင်းမြတ်လှသော ဒါန ၊ သီလ၊ ဘာဝနာ မြတ်ကောင်းမှု့တွေကို ကြိုးစားပြုလို့ နှစ်ဟောင်းက အကုသိုလ်အညစ်ကြေး အပြစ်ဘေးထိုက်သည့် ဒုစရိုက်တွေကို နှစ်ခဲ့ ကြပါစို့လား ...နှစ်သစ်မှာ ကုသိုလ် သုစရိုက်တရားတွေနဲ့ ဘ၀ကို သစ်လွင်တောက်ပြောင်လာအောင် ရွက်ဆောင်ကြပါစို့လားလို့ တိုက်တွန်းရင်း စာရေးသူရဲ့ အတွေးလေးတွေကို နိဂုံးချုပ်ပါရစေ
မေတ္တာသီသေန စိတ္တေန ..........အရှင်နန္ဒ၀ံသ ။
ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ ၊(Amarillo,Texas,U.S.A
Posted by Alex Aung at 8:23 AM No comments:
Labels: ပွဲတော်, ဗဟုသုတ
ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ကူးပြောင်းရာ၌ သာမန်ပြည်သူလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍ (အပိုင်း-၃)
ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများနှင့် ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ နှစ်ချက်အကြားမှ အဆက်အစပ် နွယ်ယှက်နေခြင်းကို ဇာစ်မြစ်မကျ၊ မူမမှန်ဟု စဉ်းစား၍ ရကောင်းရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် နောက်ပြန်ဆုတ်မှုကို လေ့လာ သုံးသပ်ကြရာ၌ ဒီမိုကရေစီ aကျာကပ်ဘက်ခြမ်း သက်ရောက်မှု အဆိုးတို့အတွက် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော် အင်စတီကျူးရှင်း များကို စိတ်ချယုံကြည်ချက်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အင်စတီကျူးရှင်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်း များအောက်၌ ကာလတရပ် ကြာရှည်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် စသည်တို့ကို ထည့်သွင်း တွက်ချက်ကြ၏။
ကျနော်တို့ တွေ့ရှိ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်မှာ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်မှု စံတန်ဖိုးများအနေဖြင့် ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီတွင် စိတ်ဝမ်း ပိုမိုကွဲပြားမှုနှင့် အလှမ်းဝေးကွာလှပြီး တခြား မတည်မငြိမ် ဒီမိုကရေစီ၌ လုပ်ဆောင်နေကျ လုပ်နေကြသည်ထက် သာလွန်ကြောင်း ကောင်းစွာ ရှင်းပြနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရေချိန်၊ ဝင်ငွေမညီမျှမှု၊ ပညာရေး အဆင့်အတန်း၊ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားစာပေများ ပြန်မြှင့်တင်အားပေးခြင်း၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ (များ) စသော ဒီမိုကရေစီ နောက်ပြန် မဆုတ်ရေး ထိန်းသိမ်းကြဖို့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များကို ကိုင်တွယ်ရသော နယ်ပယ်များစွာ၌လည်း ထိရောက် အားကောင်း ဒီမိုကရေစီ အသန်စွမ်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများက ဖြစ်တည်ပေါ်ထွန်းစေပြန်ပါ၏။ ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် အကောင်းဆုံး ခန့်မှန်းနိုင်စေပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများနှင့် ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ နှစ်ရပ်အကြား ဆက်စပ်နေမှုကို စံတန်ဖိုးများ ပေါ်ထွန်းရန် အင်စတီကျူးရှင်းများက အခြေခံပေးရသည်ဟူသော အဖြေတရပ် ထုတ်ကြည့်ပုံမျိုးလည်း မမြင်ရပြန်ပါ။ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ အောက်၌ ကာလတရပ် ရှည်ကြာအောင် ဖြစ်တည်ပြီးခဲ့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် အနေဖြင့် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုရေချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရာ၌ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်မှု စံတန်ဖိုးများအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု တွေ့လည်း မတွေ့ရ၊ ရှိလည်း မရှိပါ။
ဒီမိုကရေစီ (သို့မဟုတ်) အာဏာပိုင် ဘယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာပဲ နေထိုင်ကြရသည်ဖြစ်စေ လူတွေအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြု လေးစားမှု ကင်းမဲ့တတ်ကြသည်ဖြစ်စေ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုက ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ တိုးပွားပျံ့နှံ့ အောင် ရှေးရှုစေလေတော့ ဟူသည့်ပုံစံ ရှိပြန်သည်။
ဤတွေ့ရှိ ဖော်ထုတ်ချက်များက ဒီမိုကရေစီနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဘာကြောင့် ချိတ်ဆက်နေကြောင်း ရှင်းလင်းပြသနေပါ၏။ ဖွံ့ဖြိုးမှုက ပြည်သူလူထု၏ ရင်းမြစ်များကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်းဖိုးများကို မြင့်မားစေသည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ်မှုကို ဦးစားပေးမြင့်တက်စေသည်။
ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများက အကျယ်ပြောဆုံး လွတ်လပ်သော ရွေးချယ်ခွင့်ကို တပြေးညီ အပ်နှင်းပေးလိုက် ကတည်းက ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်းဖိုးများနှင့်အတူ ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်ရှာဖွေစေ ခဲ့တော့သည်။ နောက်ပြန်ဆုတ်မှု လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီတွင် စံမတူပြောင်းလဲချက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက် အရင်းအမြစ်များ၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ရေချိန်၌ ၎င်းတို့ဘာသာ ပြန်ရှင်းပြ အဖြေထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် နောက်ပြန်ဆုတ်မှုတွင် ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ၏ အင်အား တရပ်ရပ် ပါဝင်နေပါက လှုပ်ရှားရင်းမြစ်တို့၏ ရှင်းပြနိုင်ဖွယ်ပါဝါမှာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားသည်။
ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း မညီမညွတ် ဖြစ်လာပါကလည်း ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီအရောက်၌ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ပြန်ယူ မျှခြေညီသွားကြောင်း တွေ့ရ၏။ အရင်းအမြစ်များ ကြီးထွားခြင်းကြောင့် ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီကို ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးစေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီဟူသည် အီလစ်တို့က ဒီမိုကရေစီကို ခုတုံးလုပ် ဆင့်ပွားမွေးစား၍ လေဟာနယ်တရပ် အတွင်း ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ပေါ်ထွန်းလာခြင်းမျိုးမဟုတ်။ လူထုက ဒီမိုကရေစီကို တပ်မက်ခြင်း ကြီးမား၍ ကောင်းစွာစုဖွဲ့၊ အားပေး၊ မြင့်မားစွာ ရည်မှန်းဆောင်ရွက်ကြရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ပေါ်ထွန်းလာသည်။ ဤအရေးအရာ ကိစ္စတွင် အီလစ်တို့ ရွေးချယ်ခွင့် နည်းပါးသွားပြီဖြစ်သည်။
ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု စာပေက အမြဲတာဝန်ယူတတ်ခြင်း တရပ်ရှိသည်။ လူထု၏ ရေရာသေချာသော ကျင့်ကြံပုံများ အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို တိုက်ရိုက်သွယ်တန်းနေ၏ ဟူသော အယူဖြစ်၏။ သို့ငြား ဤယူဆချက်သည် ယူဆချက်သာ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး လုံးဝ တာဝန်ခံယူနိုင်ပြီဟု ယနေ့အထိ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြော၍မရသေးခြင်းမှာ သစ္စာတရားနှင့်၊ ကံကြမ္မာအလုပ် နှင့် လှုပ်ရှားနေကြရဆဲ ဖြစ်သောကြောင့်ဟု မြင်ရပါသည်။
အယ်လ်မန်ဒ်နှင့် ဗာဘာတို့ ရေးသားခဲ့ပြီး နာမည်ကျော် သြဇာကြီးလှသောစာအုပ် “ပြည်သူ့ ယဉ်ကျေးမှု” (၁၉၆၃ ထုတ်) တွင်ပင် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံကိုသာ လေ့လာပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အချက်အလက် ကိန်းဂဏန်း သက်သေ သာဓကအရ အားကိုးနိုင်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဗဟိုပြု၍ ယေဘုယျရေချိန်ဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး တသီးပုဂ္ဂလ လူသား၏ သေချာရေရာသော ကျင့်ကြံမှုဟန်ပန်နှင့် ဒီမိုကရေစီ ဆက်နွယ်ချက်ကို အတိအပ မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ (ထိုစာအုပ်ကို နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု ပညာရပ်နယ်ပယ်၌ ယနေ့တိုင် အကိုးအကားအဖြစ် လူပြောများနေဆဲဖြစ်သည်။)
ယနေ့ ကျနော်တို့၏ ကမ္ဘာ့စံတန်ဖိုးများ စစ်တမ်းကောက်ယူရေး (WVS) အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် နေထိုင်သော နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်ကို လွှမ်းခြုံ ဖြန့်ကြက်၍ တိုင်းတာဆောင်ရွက်နေရာတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံး ဒီမိုကရက်တစ် ပိုဆန်မှုကို ဦးစားပိုပေး လုပ်ကိုင်သည်။ ဘယ်သို့သော ဆက်စပ်ကျင့်ကြံပုံများ ရှိသည့်နိုင်ငံဖြစ်စေ၊ တကယ့် လက်တွေ့နှင့် ကျယ်ပြန့်လွှမ်းခြုံနိုင်မှုကို ဂရုပြုလေ့လာ ဆန်းစစ်သည်။
တွေ့ရှိချက်များက အမှန်တကယ် ရေရာသော လူထုကျင့်ကြံ ဆောင်ရွက်ပုံများသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် အားကောင်းမောင်းသန် ဆက်စပ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသပါသည်။ ဘယ်သို့သော ကျင့်ကြံမှုပုံစံများက ဆိုးရွားလှသည် ဆိုခြင်းမျိုးကို ဝေါဟာရတရပ်ဖြင့် ပြောဆိုရန် သိပ်မလွယ်ကူလှကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိရပြန်သည်။
နောက်ဆုံး သုတေသနများအရ ဆိုလျှင်တော့ ဒီမိုကရေစီကို ပိုမျက်နှာမူကြသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများက ဒီမိုကရက်တစ် ပိုဖြစ်လာဖို့ ရှိကြောင်း တာဝန်ခံယူနိုင်သော စစ်တမ်းများဖြင့် သိရှိရပါ၏။ ထိုတင်ကူး တွေ့ရှိချက်က သြဘာပေးဖွယ် ဖြစ်ပုံရသည်။ ဥပမာအဖြစ် နှိုင်းယဉ်ပြရပါက ဆွီဒင်နှင့် ဆွစ်ဇာလန်မှာထက် အယ်လ်ဘေးနီးယားနှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်တို့တွင် ဒီမိုကရေစီရေးကို ပိုမိုဖော်ထုတ်လာကြ၊ ပြောဆိုလုပ်ကိုင် ရှေးရှုလာကြသူ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြင့်မားလာနေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
သမိုင်း၌ ဤသို့ ထောက်ပြစရာများအရ ပြည်သူလူထုအများစုက ဒီမိုကရေစီကို နှုတ်ဖျားမှ ပြောနေကြသည်ထက် နိုင်ငံ အများစုကြီးထဲမှ အားကောင်းသန်မာ လူများစုအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီသည် အကောင်းဆုံးအစိုးရ ပုံစံတရပ်ဟု အမြင်များ ဖော်ထုတ်ခံယူ ကြိုးပမ်းလာကြခြင်းက ဆန္ဒပိုပြည့်နိုင်ခြေများကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် ဤအချက်ကို နက်ရှိုင်း အမြစ်တွယ် ဦးတည်ချက်များ (သို့မဟုတ်) အားကောင်းသော လှုံ့ဆော်မှုများဟု တိတိပပ လိုအပ်ချက်အဖြစ် ဖော်ပြရန် မရှိပါ။ ဖော်ပြချက် မဟုတ်ပါ။ တချို့ကိစ္စရပ်များတွင် ဤအချက်က လူမှုဆန္ဒပြုနိုင်သည့် ဦးတည်ရာ သက်ရောက်ချက်များကို ခပ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရောက်ပြန်ဟပ် ရိုက်ခတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဂလိုဘယ်အရ လွှမ်းခြုံဆိုပါမည်။ ဒီမိုကရေစီကျောကပ် မကွယ်မထောက် လူထုရေချိန်တရပ်ကို အတိအလင်း မြင်ရသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်လုံး အဆင့်သို့ ဒီမိုကရေစီ ဝင်ရောက်ဖြစ်တည် ပေါ်ထွန်းလာနေကြောင်း ပြယုဂ်များအရ ထင်ရှားလှပါ၏။ သို့ငြား ရုတ်တရက် ကြည့်လျှင်တော့ ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံနှုန်းများသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် တိုက်ရိုက် ကူးပြောင်းလွှဲအပ် မှုမရှိသလို မြင်ကြရသည်။ ဒီမိုကရေစီကို အတိအလင်း ထောက်ကူပြု ပံ့ပိုးသည်ထက် အင်အား ပိုကြီးသော ဟောကိန်းထုတ်သူ တရပ်သဖွယ် ပိုထင်မြင်ယူဆနိုင်သည်။
ဒီမိုကရေစီကို တခြားတဖက်မှ ပြောပါက အတွင်းကျပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ယုံကြည်ချက် တွဲဖက်နေမှုနှင့် အတိအကျ လိုအပ်သည် မဟုတ်ပြန်။ အခြားအုပ်စုများ၏ သဘောထားကြီးမှု၊ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားဝါဒ စသော ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု ဗဟိုချက် စံတန်ဖိုးများနှင့်လည်း ထိုနည်းတူ ပူးပေါင်း အဖော်ပြုနေခြင်းဟု တိတိပပ မဆိုနိုင်။
လက်တွေ့ကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ချက်က ဤကိစ္စများသည် နှုတ်ဖျား စကားကြွယ်သည်ထက် ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ ပေါ်ထွန်းဖြစ်တည်စေရန် များစွာ ပိုအရေးပါလှပါ၏။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဖော်မှု စံတန်ဖိုးများဟူသည် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော လူထုလှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်ချက်တို့ကို ပိုသက်ဝင် ထိရောက်စေသောကြောင့် တစိတ်တကဏ္ဍ တပိုင်းမက မှန်ကန်နေသည်ဟု တွေ့မြင်ရပါ၏။
ဤတန်ဖိုးများက လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို အစိုးရခြင်းတို့ကို ၎င်းတို့ဘာသာပြု၍ မြင့်မြင့်မားမား ဦးစားပေးစွမ်းစေပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ၏ တခြားတဖက် အတိအကျ၌ အတိအလင်း ဆိုရလျှင် တခြားဝေါဟာရအားဖြင့် တပါးသော လှုံ့ဆော်အားပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ဖြစ်စေအောင် တိုက်တွန်းသည်များ ထင်ဟပ်ရိုတ်ခတ်မှု ရှိကောင်းရှိပါမည်။
စစ်တမ်းကောက် လေ့လာရရှိသည်တို့မှ ထွက်ပေါ်လာသော အဖြေများအရ လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်လုံးအဆင့်၌ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ အမှန်တကယ် တည်တံ့နေစေရေးတွင် ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သူအဖြစ် ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများထက် အာဏာရှင် ဒီမိုကရေစီပုံစံများ တလှည့်စီ ဖြစ်နေခြင်းကို ရွေးချယ်မိခြင်းက ကာလရှည်ကြာ ချည့်နဲ့အားနည်းနေတတ်စေကြရမြဲဟူ၍ ခပ်ရှင်းရှင်း မြင်တွေ့ရပါသည်။
ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ ပေါ်ထွန်းခြင်း
ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများနှင့် ထိရောက်အားကောင်း ဒီမိုကရေစီအကြားတွင် မှတ်ချက်ပြုလောက်သည့် အားကောင်းလက်တွေ့ကျ အပြန်အလှန် ဆက်စပ်နေမှုတရပ် အထင်အရှားရှိသည်။ ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများမှ ဒီမိုကရေစီသို့ ပင်မရေစီး အခြေခံအကြောင်းရင်း ဆက်နွယ်မှုသည် တခြားနည်းလမ်း ဝန်းကျင်များနှင့် တူသယောင် ကွဲပြား၏။ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်စေအောင် နေရာချ သတ်မှတ်ပေးဖို့ မလိုအပ်။ ဤသည်မှာ လက်တွေ့သာဓက ရရှိပြသနေခဲ့သော ပြယုဂ်ဖြစ်၏။
ကမ္ဘာ့စံတန်ဖိုးများ စစ်တမ်းကောက်ယူရေး (WVS) ၏ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တို့က ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်း နောက်ဆုံးလှိုင်း၏ ဖြတ်သန်းလာရာ နှစ်ကာလများကို အသေအချာ ထုတ်ပြ ပုံဖော်ပေးထားသည်။ ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ အတွင်းကျကျ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် တန်ဖိုးမြင့်ပြောင်းလဲလာသော နည်းလမ်းဖြစ်စဉ် တရပ်ကို ဖြတ်သန်း၍ ပေါ်ထွန်းလာသည်မှာ အနောက်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးများ၌သာမက အာဏာရှင် ပုံစံခွက်ထဲမှ လူ့အဖွဲ့အစည်း များထဲတွင်လည်း ဖြစ်တည်လာနေခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ကမ္ဘာ့အာဏာရှင် အဆန်ဆုံး နိုင်ငံများထဲမှ အရှေ့ဂျာမနီနှင့် ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား နှစ်နိုင်ငံတို့ ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများကို ရေချိန်မြင့် ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့သည်။ အဓိကကိစ္စက နိုင်ငံရေးစနစ်မဟုတ်။ ထိုနှစ်နိုင်ငံသည် ကွန်မြူနစ်ကမ္ဘာတွင် စီးပွားရေးရှေ့ အပြေးဆုံးနိုင်ငံများ ဖြစ်ခဲ့ကြသော်လည်း ရှုပ်ထွေးပွေလီလှသော ပညာရေးနှင့် လူမှုဖူ လုံရေးစနစ်တို့အကြား ရပ်တည်ခဲ့ကြရ၍ ဆိုဗီယက်စစ်ရေး ကျူးကျော်သိမ်းသွင်းမှု ဆုတ်ခွာသွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဒီမိုကရေစီသို့ ဦးတည် ရှေးရှုလာကြတော့သည်။
ကြီးမားကျယ်ပြန့် မျှဝေနိုင်ကြသော လူဦးရေတရပ်က ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး အာမခံချက်ရယူလိုမှု မြင့်လာချိန်တွင် ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မှု စံတန်ဖိုးများ ပေါ်ထွန်းလာတော့သည်။ နိုင်ငံရေးအရ အဖိနှိပ်ဆုံး အစိုးရများ လက်အောက်၌ပင် ဤကမ္ဘာ့ အမြင်အယူအဆက ရုပ်ဝတ္ထုဆန်ဆန်ပြုမှုဆီ ဦးတည် တိမ်းညွတ်လာခြင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုရင်းမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးလာစေကဲ့သို့ ဖြစ်လာရခြင်းပင်။ ထိုဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်လာသည်မှာလည်း လူတွေအနေဖြင့် စီးပွားရေး ပိုခိုင်လာရန်၊ အသိဥာဏ်ပညာ ပိုမြင့်မား လွတ်လပ်လာစေရန်၊ ပို၍ နေပျော်လာရန်၊ လူမှုအဆက်အစပ်များ ပိုချိတ်ဆက်မိစေရန် အာသီသများ ပိုဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရရှိ နိုင်စေရေး နားလည်သိမြင်လာ၍ ဖြစ်သည်။
ဤလွတ်မြောက် ကြီးပွားလိုသူ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဘာကို ယုံကြည်ရမည်လဲ၊ ဘယ်သူနဲ့ ချိတ်ဆက်ရမည်လဲ ဆိုခြင်းအပေါ် လုံ့လပြုလာကြခြင်းသည် အချိန်နှင့်ဓနကို မည်သို့ သုံးစွဲမည်၊ ထိုအရာရရှိရန် ဘာကိုရွေးချယ်ရမည် ဆိုသည်များကို သဘောပေါက်လာခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။
နှိပ်ကွပ်အုပ်ချုပ် အစိုးရတို့အတွက် ဤလိုလားချက်များကို စောကြောစစ်ဆေးရန် ခက်ခဲလာသည့်တိုင် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ခေတ်မီတိုးတက်ရေးကို အချိန်မီ ချိတ်ဆက်ဖွင့်ဟပြလိုက်ကြသည်။ ထို့နောက် ထိရောက်အားကောင်း ဆောင်တာတရပ် ပေါ်ထွက်မလာရေး ပိတ်ဆို့နိုင်ရန် တခြားတနည်းဖြင့် ဖိနှိပ်ဖို့ ဦးတည်ကြပြန်၏။
ပြည်သူလူထု (လူတွေ) ၏ ရုပ်ဝတ္တုတန်ဖိုး အဓိပ္ပာယ်များ၊ လုံလောက်ကြွယ်ဝစေမည့် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ လူမှု ချိတ်ဆက်ရေးများ (တခြားတနည်းဖြင့် ပြောလျှင်) ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်ရင်းမြစ်များ တိုးပွားသိမြင် ရယူလိုလာသည်နှင့်အမျှ ခေတ်မီ တိုးတက်ရေး ခေါင်းစဉ်အောက် လူတို့၏တန်ဖိုးများ ချိန်ညှိကောင်းမွန် ပြောင်းလဲလာပြီး လှုပ်ရှားမှုတို့လည်း ပိုကျယ်ပြန့်ကြီး ထွားလာတော့သည်။ မတိုင်ပင်ဘဲ ဇာတ်တိုက်ထားသလို ဖြစ်လာသည့် လူတွေအနေဖြင့်လည်း လွတ်လပ်သော ရွေးချယ်မှု နှင့် တသီးပုဂ္ဂလ မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်အစိုးရမှုတို့၌ လှပကောင်းမွန်သော စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ရှိသည်ဆိုခြင်းကို သိလာသဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် ရင်းမြစ်တို့ကို အသုံးပြုရန် ဦးတည် ရွေ့လျားလာကြတော့သည်။ လူထု၏အပြုဆောင် ကောင်းစွာ ဖြစ်တည်ချက်ကို ယူနီဗာဆယ် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ကောင်းမွန် တိမ်းညွှတ်မှု တရပ်အဖြစ် မြင်လာကြသောကြောင့် ထပ်မံ ဆင့်ပွားတိုးမြှင့်လိုက်ကြသည်။
ဤနေရာ၌ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ခေတ်မီတိုးတက်မှုတို့ ကျိန်းသေ ဖြစ်ထွန်းလာမည်ဟု လုံးလုံးလျားလျား အာမခံချက်တော့ မရှိပါ။ တချို့သော အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေး နိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးလာကြသော်လည်း တချို့၌ ဖြစ်မလာ။ သို့သော် ခေတ်မီရေး လုပ်ကိုင်လာကြသော စာရင်းပေါက်နိုင်ငံများ၌ မော်ဒန်နိုက်ဇေးရှင်း၏ ဖြေလျှော့မှု သက်ရောက်ချက်တို့ကိုတော့ တွေ့မြင်ကြရသည်။ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတံဆိပ် ကပ်နှိပ် ဆွဲခတ်လိုက်ရုံအပြင် လုပ်နိုင်တာ သိပ်မရှိလှတော့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၂၀ ရာစုကာလ အတော်များများ၌တော့ ဖက်ဆစ်နှင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒတို့ တလှည့်စီ ရှင်သန် ထောင်ထခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူထုပညာရေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတို့နှင့် တဆက်တစပ်တည်း စက်မှုခေတ် ထူထောင်နိုင်သည်ကတော့ ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီ၌သာ ဖြစ်ထွန်းနိုင်ခဲ့ကြပါ၏။ ပညာအခြေခံ (သို့မဟုတ်) စက်မှုခေတ်လွန် လူ့အဖွဲ့အစည်း မြင့်မြင့်မားမား တိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ ပြန့်ပွားမှုက ပိုမိုနှစ်ခြိုက် ရွေးချယ်လာကြသည့် လမ်းကြောင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
(ခရစ္စတီယန် ၀ယ်လ်ဇယ် (Christian Welzel) သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘရီမင်းမြို့၊ ဂျက်ကော့ဘ်စ်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးစံများ စစ်တမ်းကောက်ယူရေး အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ရော်နယ်အင်း ဂဲဟာ့တ် (Ronald Inglehart) သည် မီချီဂန်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးစံများ စစ်တမ်း ကောက်ယူရေး ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ထုတ် “ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု အပြောင်းအလဲနှင့် ဒီမိုကရေစီ” စာအုပ်ကို ခရစ္စတီယန်ဝယ်လ် ဇယ်နှင့် ရော်နယ် အင်ဂဲဟာ့တ်တို့ ပူးတွဲရေးသားခဲ့ပြီး တခြားထင်ရှားသော စာအုပ်များကိုလည်း ပြုစုခဲ့သည်။ ယခု ဆောင်းပါးကို Journal of Democracy နှင့် Johns Hopkins University Press တို့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီး Educational Initiatives (ပညာရှေ့ဆောင်) က ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Educational Initiatives (www. eduinitiatives.org) အဖွဲ့သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းများ၊ အရည်အသွေးမြှင့် သင်တန်းများကို ပို့ ချပေးနေသော ရန်ကုန်အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။)ritten by ခရစ္စတီယန် ၀ယ်လ်ဇယ်)
Posted by Alex Aung at 9:06 AM No comments:
♪ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ နာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များခဲ့သော ...
" ကျွန်လုပ်သားများထုတ်လုပ်သည့် ပင်လယ်စာ " (အပိုင်း...
ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ကူးပြောင်းရာ၌ သာမန်ပြည်သူလူထု...
ချစ်တင်းနှီးနှောစဉ် အမျိုးသားများ ပြုလုပ်တတ်သည့် အ...
ဒုလ္လဘရဟန်းဝတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးနှင့် သတိထား ဆင်ြ...